ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဆွတ်ခူးလိုက်ပါပြီ
ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးအသင်းကို တခဲနက် အားပေးနေကြတဲ့ မြန်မာပရိသတ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဆွတ်ခူးလိုက်ပါပြီ။ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၄ ညနေပိုင်း အမျိုးသမီးခြင်းလုံးခတ်ပြိုင်ပွဲမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာ့ရုပ်သံက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးခြင်းခတ်အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးက လှလှပပ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အစွမ်းပြသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အခု ဒီပို့စ် ရေးနေချိန်မှာတော့ အမျိုးသား ခြင်းလုံးခတ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအသင်း အစွမ်းပြနေပါပြီ။
အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တွေ့ရတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် ၃ ခုကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ မြန်မာအသင်း ပထမ ရွှေတံဆိပ်
၂။ ထိုင်းအသင်း ဒုတိယ ငွေတံဆိပ်
၃။ မလေးရှားအသင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားအသင်း တတိယ ကြေးတံဆိပ် ပူးတွဲ
ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆု မြန်မာအမျိုးသမီး ခြင်းလုံးအသင်းမှ ဆွတ်ခူး
မြန်မာအမျိုးသမီး ခြင်းလုံးအသင်း( ၁၇၈ )မှတ် စုစုပေါင်း ရမှတ်(၅၃၅) မှတ်
ထိုင်းအမျိုးသမီးခြင်းလုံးအသင်း( ၁၃၄)မှတ် စုစုပေါင်း ရမှတ်(၃၇၅) မှတ်
မြန်အသင်းဟာ ပထမပွဲစဉ်မှာ ပွဲငယ်သုံးပွဲလုံး အနိုင်ရရှိထားပါပြီ။
မြန်မာအမျိုးသမီး- (၁၇၅) (၁၈၂) ( ၁၇၈ ) စုစုပေါင်း ( ၅၃၅ ) မှတ်
ထိုင်းအမျိုးသမီး - (၁၁၄) ( ၁၂၇) ( ၁၃၄ ) စုစုပေါင်း ( ၃၇၅ ) မှတ်
မြန်မာအမျိုးအသီး ခြင်းလုံးအသင်းအတွက် ချီးမြှင့်မည့် ရွှေတံဆိပ်ဆု
မြန်မာအမျိုးသား ခြင်းလုံးအသင်း Vs ထိုင်းအမျိုးသား ခြင်းလုံးအသင်း
ပွဲငယ်(၃)ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲငယ်တစ်ပွဲလျင် ၁၀ မိနစ်ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ဂန္တဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဘ သားနှင့် ခရိုနီများ အရှုပ်တော်ပုံ
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မူးယစ်ဗဟို အစီရင်ခံစာမှ ထုတ်နုတ်တင်ပြပါသည်-
(တရားခံ မင်းနိုင်(ခ) စိုးလှိုင်မြတ်၏ အစစ်ခံချက်မှ-)
ကိုအောင် (ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဘ၏သား)နှင့် ဆက်သွယ်ရင်းနှီးမှု
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလခန့်က ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်သို့ ကျွန်တော်သွားစဉ် ကိုအောင်နှင့်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး ကိုအောင်မှ ကျွန်တော်အား စိတ်ပြောင်း/စိတ်ကြွဆေးပြားများ ပေးသုံးစွဲခဲ့ပြီး ကျွန်တော်မှလည်း အက်စ်တစီ ဆေးပြားများ ပြန်လည်ပေးသုံးခဲ့ဘူးပါသည်။ ကိုအောင်ကို ၄င်းနှင့်အမျိုးတော်သူ နဝရတ်(ခ)မဇာ မိတ်ဆက်ပေး၍ သိရှိရပါသည်၊ကိုအောင်နှင့် တစ်ခါတစ်ရံခန့်သာ ဆုံဖြစ်ပြီး ၄င်း၌ဆေးပြားရှိလျှင် ပေးပြီး ကျွန်တော်၌လည်း ရှိလျှင် တွေဆုံသည့်အခါတိုင်း ပေးဖြစ်ပါသည်။
၂ဝဝ၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်၌ ကိုအောင်မှ ကျွန်တော်အား ' ၅' တံဆိပ်ပါ အဝါရောင် ဆေးပြား(၅)ပြားအား ပေးခဲ့ပြီး ထိုဆေးများကို ကျွန်တော်မှ မိန်းကလေးများနှင့် မဆက်ဆံမီ နာရီဝက်ခန့် အလို၌ ရေနှင့်တစ်ကြိမ်လျှင်(၁)လုံး သောက်ခဲ့ရာ (၃)ကြိမ်ခန့် သောက်ခဲ့ဘူးပါသည်၊ ထိုဆေးပြားအား လျှာအောက်တွင် ထည့်၍ငုံထားပါက ပို၍ကောင်း ကြောင်း ကိုအောင်မှ ပြောဘူးပါသည်၊ယခု သိမ်းဆည်းခံရသော ' ၅ 'တံဆိပ်ပါအဝါရောင်ဆေးပြား(၂)ပြားမှာ ကိုအောင်မှ ပေးခဲ့သော ဆေးပြားများ ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဧပြီလ သင်္ကြန်တွင် လျှောက်လည်ရင်း သရုပ်ဆောင်ဂန္တဝင်နှင့်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ချစ်သူ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနှင့်ကျွန်တော်တို့သည် အက်စ်တာစီဆေးပြားသုံးစွဲဘူးပါသည်။ ၄င်းအား ကျွန်တော်ပေး၍ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလခန့်တွင် ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံနေ ကျော်သူအောင်အား ရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်လာစဉ် ၄င်းမှ အက်တစီ ဆေးပြား(၁၅)ပြား ပေးသဖြင့် သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ ကျော်သူအောင်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိပါသည်။
အောင်ဇော်ရဲမြင့် ( ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား)နှင့်ဆက်သွယ်ရင်းနှီးမှု
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလခန့်တွင် ကျွန်တော်သည် ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်သို့သွားစဉ် နဝရတ်(ခ)မဇာ မိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ပြီး (WY)စိတ်ကြွဆေးပြား ပေးသုံး၍ မကြာခဏ သုံးစွဲဘူးပါသည်၊ အောင်ဇော်ရဲမြင့်၏ဖုန်းအမှတ်မှာ ဝ၉-၅ဝဝဝဝဝ၅ ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ပထမပါတ်တွင်ပင် ကျွန်တော် ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်သို့သွားစဉ် အောင်ဇော်ရဲမြင့်မှ (WY) စိတ်ကြွဆေးပြား (၇ဝ)ပြားကို ကျွန်တော်၏ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲသို့ လက်ဆောင်ပေးသွားခဲ့၍ ရရှိခဲ့ပါသည်၊၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်သည် ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်သို့သွားစဉ် အောင်ဇော်ရဲမြင့် နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ၄င်းမှ ကျွန်တော်၏မွေးနေ့ အတွက် အက်တက်စီဆေးပြား (၃ဝ) ပြားပေးခဲ့ပါသည်၊ကျွန်တော်မွေးနေ့ မှာ ၂ဝဝ၈ မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
မောင်ဝိတ်၊ အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသား မန်းနီးတို့၏ဆက်စပ်မှု
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလခန့်တွင် အောင်ဇော်ရဲမြင့်သည် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ (လှော်ကားဥယျာဉ်တွင် ကာစီနိုဝိုင်းဖွင့်ရန်၊ ဘိုင်အို ဒီဇယ်ထုတ်သည့်စက်များ ပြည်တွင်းသို့ သွင်းရန်) ဆောင်ရွက်ရန် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သွားရောက်စဉ် ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ ကွန်းကော့ ဟိုတယ်၌ တည်းခိုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တည်းခိုစဉ် မန်းနီးဆိုသူမှ လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကလပ်များသို့ခေါ်၍ ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ ထိုသူမှာ မလေးရှား မာဖီးယားဖြစ်ကြောင်း ကိုအောင်မှပြောပြ၍ သိရှိခဲ့ပါသည်။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကလပ်များသို့ သွားရောက်သည့်အခါ မန်နီးမှာ မြန်မာပြည်မှ နံပါတ် ၅ အဆင့်ရှိသူ၏ သားဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ကာစီနိုဝိုင်းသို့သွားသည့်အခါ ကိုအောင်အား မောင်ဝိတ် င်္Family ဟုသာသိရှိကြပါသည်။ မောင်ဝိတ်နှင့် အောင်ဇော်ရဲမြင့်တို့ ကာစီနိုဝိုင်းသို့ သွားရောက်ဖူးသည့်အတွက် မောင်ဝိတ် Family ဟုသိရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ကာစီနိုဝိုင်းအား ဘွတ်ကင်ပြုလုပ်သည့်အခါ မောင်ဝိတ် Family ဟုသာ ပေးခဲ့ပါသည်။ မန်းနီးမှာ အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် အေးမြတ်အောင်တို့ နေပြည်တော်၌ မင်္ဂလာဆောင်စဉ် မလေးရှားနိုင်ငံမှလာရောက်ခဲ့ပါသည်။
(တရားခံ ချမ်းကျော်၏ စစ်ချက်မှ-)
အောင်ဇော်ရဲမြင့် လက်နက်နှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ
၂၆။ ကျွန်တော်သည် အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့်အတူ Micasa ဟိုတယ်တွင် အတူတည်းခိုနေစဉ် သေနတ်လိုချင် ကြောင်း၊ ကျော်စွာမြင့်အား လာရောက်ပေးရန်ဖုန်းဆက်ပြောရာ ကျော်စွာမြင့်မှ ပစ္စတို ၉ MM သေနတ်နှင့် လေ့ကျင့်ရေးသေနတ်တို့အား လာရောက်ပေးပါသည်။ BME ကလပ်သို့သွားသည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံယူသွားပြီး မန်နေဂျာကိုခေါ်ပြီး ကားတံခါးဖွင့်ပြကာ သေနတ်ပါကြောင်း ပြောပြခြောက်လှန့်တတ်ပါသည်။
၂၇။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလခန့်တွင် ကျော်စွာမြင့်မှ Micasa ဟိုတယ်သို့ လာရောက်၍ အောင်ဇော်ရဲမြင့်အား သေနတ်လာပို့စဉ် ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲ၌ ရှိနေပါသည်။ ထိုလာပို့သည့် ၉ MM သေနတ်မှာ သေနတ်အစစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကိုင်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ ဟိုတယ်အခန်းထဲတွင် ကိုနေလင်းကျော်ပါရှိနေပြီး ၉ MM သေနတ်အား နေလင်းကျော်မှကိုင်၍ သေနတ်ကျည်အိမ်ကို ဖြုတ်ကြည့်ပါသည်။ သေနတ်ကျည်အိမ်ထဲတွင် ကျည်ဆံမပါရှိပါ။ အပြင်၌လည်း ကျည်ဆံမတွေ့ပါ။ ကျွန်တော်မှလည်း လေ့ကျင့်ရေးသေနတ်ဟု ကိုအောင်ဇော်ရဲမြင့်မှ ပြောကြားသည့် အရှည် (ခေါက်လျက်) ၁ ပေကျော်ခန့်ရှိ သေနတ်ကို ကိုင်၍ကြည့်ပါသည်။ သေနတ်မှာ ခေါက်၍ထားပြီး ကိုယ်ထည်တွင် ကပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သေနတ်ကိုယ်ထည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိပြီး လေးပါသည်။ သေနတ်ကိုယ်ထည် တစ်ခုလုံးမှာ သံထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ကျွန်တော်မှ ၂ ကြိမ်ခန့်ကိုင်တွယ်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က သေနတ်လာပေးချိန်မှာ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီခန့်ရှိပြီး သေနတ်လာပို့ပြီး နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် ကျော်စွာမြင့်မှာ ပြန်သွားပါသည်။ သေနတ်လာပို့သည့်နေ့က Micasa ဟိုတယ်တွင် ကိုအောင်နှင့်အတူနေထိုင်သူ မဖြူဖြူ (ခ) အုန်းမွှေးလုံး၊ ကျော်လှိုင်၊ နေလင်းကျော်တို့လည်း ရှိနေပါသည်။ သေနတ်လာပို့သည်ကို ဖြူဖြူမှာ အများဆုံး သိရှိနိုင်ပါသည်။ သေနတ်လာပေးပြီးနောက် ရက်မမှတ်မိနေ့ညပိုင်းတွင် BME-1 ကလပ်သို့ ကိုအောင်မှ သေနတ်အရှည်ကို ၄င်း၏ကား (အမည်အမျိုးအစားမမှတ်မိ) ပေါ်တွင် တင်ဆောင်လာသည်ကို ကျွန်တော်မှ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အလားတူ BME-1 မှ ဝန်ထမ်းများလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုနေ့ညက ကလပ်သို့ရောက်စဉ် နေလင်းကျော်မှ ကျွန်တော်၏ လက်ကို ဆွဲကိုင်ရင်း သူ၏ခါးကိုစမ်းခိုင်းရာမှ သေနတ်ယူဆောင်လာသည်ကို စမ်းသပ်မိပါသည်။
ဥပဒေကို မထီမဲ့မြင်လုပ်လာရင် ဆက်လက်ဖော်ထုတ်မယ်လို့ မိုးဇေညိမ်း ဆို
မူးယစ်ဆေးဝါး အစီရင်ခံစာနဲ့ စစ်ချက်တွေထဲမှာ နောက်ထပ်ဖော်ပြစရာတွေ အများအပြား ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ့အမှုကို စစ်ဆေးစဉ်က တရားခံ (၁၀) ဦး၊ ပတ်သတ်ပါဝင်သူ (၃၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၃) ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဆေးခံခဲ့ရသူ အများစုဟာ အနုပညာလောကသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁) ကို စတင်စဉ် ကတည်းက အားလုံးကို မချွင်းမချန်ဖော်ပြဖို့ စီစဉ်စဉ်းစားထားပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ပတ်သတ်ရာပတ်သတ်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်တွေနဲ့ ကာယကံရှင်များရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံမှုတွေကို ထောက်ထားပြီး ဆက်လက်မဖော်ပြတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးဟာ ဒီတိုင်းနေရင်ကောင်းပါတယ်။ ကြက်သွန်နဲ့ပေါင်းရင်တော့ အထောင်းခံမှာပါပဲ။ အနုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေကို ကုပ်စီးဖိနှိပ်နေတဲ့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ သွားပေါင်းရင်တော့ ပြည်သူတွေ ပြန်ထောင်းတာ ခံရပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိဖော်ပြနေတဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ ကျွန်တော့် လက်ဝယ်မှာ ရှိနေတဲ့ အတွင်းရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဆင့် စာရွက်စာတမ်းတွေထဲက တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ထောက်ထားပြီး လက်ရှိကိစ္စကို ဆက်လက်မဖော်ပြတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ သို့ပေမဲ့ အများပြည်သူတွေ သိရှိသင့်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခြေအနေတွေရှိရင်၊ ဥပဒေကို မထီမဲ့မြင်လုပ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေရှိလာရင်တော့ ဒီလိုကိစ္စတွေသာမကပဲ အခြားကိစ္စတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေ ကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းမိလို့ အထောင်းခံလိုက်ရတဲ့ အနုပညာရှင်များအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထိခိုက်သွားရတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ရိုးသားစွာတောင်းပန်ပါတယ်။ Public စာမျက်နှာပေါ်ကို ရောက်မလာပေမဲ့ ဒီအမှုတွဲမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေသူတွေအနေနဲ့လည်း သင်ခန်းစာတစ်ခု အနေနဲ့ နောက်နောင်ဆင်ခြင်နိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် ပိတ်ထားသောတံခါးအတော်များများကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည့်အထဲတွင် ပြည်သူများ အင်တာနက်ကို လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်သည့် အခွင့်အရေးပါဝင်လာသည်။
အင်တာနက်သုံးခွင့်ရဖို့ ယခင်လိုကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျရန်မလိုဘဲ လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် ဘီလ်ကျပ်ငွေ တစ်သောင်းမျှရှိရုံဖြင့် မက်စ်ဆေ့ခ်ျပို့၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ မိုဘိုင်းကွန်ရက်ချဲ့ထွင်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ဖြေလျှော့မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲသူဦးရေ ၁၈ သိန်းနီးပါး တစ်နှစ်အတွင်း တစ်ရှိန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် အင်တာနက်မြန်နှုန်း(Connection)ကတော့ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များလိုပင် မထူးခြားနား နှေးမြဲနှေးဆဲဖြစ်သည်။
အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသောစာရင်းအရ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ လေးဦးသာရှိခဲ့သည့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူဦးရေ ၁၈ သိန်းနီးပါး တိုးလာသည်အထိ နှေးကွေးမြဲဖြစ်သော ကွန်နက်ရှင်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ သီချင်းများကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဒေါင်းလုတ်ရယူရန် မဆိုထားနှင့်၊ လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပင် စတေးတပ်တစ်ကြောင်းတင်ရန်ပင် အချိန်များစွာပေးနေရသေးသည်။
“အင်တာနက်က အပျော်သုံးတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လိုမျိုးတောင် ကောင်းကောင်းမဖွင့်တာ။ လုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဒီအစိုးရသက်တမ်းမကုန်ခင်တော့ အင်တာနက်လေး လူလိုသူလိုသုံးချင်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးကပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက JICA ၏ အကူအညီဖြင့် ဆီးဂိမ်းအမီ အင်တာနက်လိုင်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အင်တာနက် Bandwidth ကို 16.7 Gbps အထိ တိုးချဲ့ထားပြီး နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် 19Gbps ၀န်းကျင် ဖြစ်လာမည်ဟုဆိုထားသည်။ ဆီးဂိမ်းတွင် အများဆုံးသုံးစွဲမည့် အနေအထားမှာ 2Gbps ခန့်သာရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဆီးဂိမ်းကာလအတွင်း အခြားနေရာများတွင် ကွန်နက်ရှင်ပိုကျသွားစရာမရှိကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်ခန့်က အင်တာနက်လှိုင်းနှုန်း Bandwidth 1 Mbps ဖြင့် သုံးစွဲခဲ့ရသော Bagan Cybertech ၏ လုပ်ငန်းများ ရုတ်တရက် ရပ်တန့်သွားစဉ်ကပင် ယခုကာလကဲ့သို့ နှေးကွေးလွန်းခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ကွန်ပျူတာပညာရှင် ဦးရဲမြတ်သူကပြောကြားသည်။ ထုိ့အပြင် ယခင်အစိုးရလက်ထက်က သုံးစွဲသူများကို ထိန်းချုပ်ရန် ၀က်ဘ်ဆိုက်အချို့ကို ကြားဖြတ်ကြည့်ရှုထားပြီး သုံးစွဲသူကို ထိန်းချုပ်သူကတစ်ဆင့် မူလ၀က်ဘ်ဆိုက်ထံ တစ်ဆင့်ခံ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့ကြောင့်လည်း နှေးကွေးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းကသုံးသပ်သည်။
“ဥပမာ User တစ်သိန်းပြည့်ရင် တစ်လုံးခွဲထုတ်လိုက်ရမှာကို User သန်းပေါင်းများစွာကို တစ်လုံးတည်းနဲ့ ထားတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒါကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် နိုင်နင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းမရှိသေးဘူး။ တချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆို ကြားတွေကနေ အတုနဲ့ဝင်ပြီး ဖြတ်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတာ။ စင်ကာပူတို့၊ တရုတ်တို့လည်း ဒါမျိုးလုပ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုထိန်းချုပ်တာတွေက အမိန့်နဲ့သွားတာ။ အခုလည်း နိုင်ငံလုံခြုံရေးအရလုပ်ရင် မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေအရ စနစ်တကျဖြစ်စေချင်တယ်။ တိကျတဲ့ဥပဒေတစ်ရပ်ရှိသင့်တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကမူ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီး ကြားကဖြတ်၍ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဟု ငြင်းဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် အစိုးရပိုင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကသာ လိုင်းများကို အဓိကစီမံခန့်ခွဲပြီး ပုဂ္ဂလိကအင်တာနက်လိုင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင် Gateway များ ထူထောင်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိသေးဘဲ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သာ အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်လိုင်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုပါက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးထံမှ Gateway ကို အင်တာနက်မြန်နှုန်းပေါ်မူတည်၍ ငွေကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူရပြီး ရောင်းချလိုသူက သုံးစွဲသူများထံ Bandwidth များခွဲ၍ သတ်မှတ်ရောင်းချရခြင်းဖြစ်သည်။
အင်တာနက်လိုင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတို့တွင်လည်း အင်တာနက်လွှင့်ပေးသည့် တာဝါတိုင် Station များ တိုးချဲ့ချင်သလောက် ချဲ့လို့မရကြောင်း Redlink မှ လက်ထောက်ထွေထွေမန်နေဂျာ ကိုမျိုးမြင့်ညွန့်ကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ Provider တွေက တိုးချဲ့လို့မရဘူး။ ပြီးတော့ Gateway တွေက တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ တိုးချဲ့ဖို့အတွက်က အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်”ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။
အစိုးရပိုင်မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ကြိုးမဲ့စနစ် WiFi ဖြင့် ရောင်းချခွင့်ကို Redlink ၊ ဂြိုဟ်တုနှင့်ချိတ်ဆက်၍ အင်တာနက်လိုင်းများသုံးစွဲခြင်း၊ MPS စနစ်ကို Sky Net ၊ ADSL နှင့် Fiber အင်တာနက်လိုင်းများအတွက် ရတနာပုံတယ်လီပို့၊ Fortune နှင့် မြို့နယ်များကို ဇုန်အလိုက် အင်တာနက်လိုင်းများ ခွဲဝေချထားပေးသည့်စနစ် FTTH ကို ELite ကုမ္ပဏီတုိ့အား လုပ်ပိုင်ခွင့် အသီးသီးပေးထားသည်။
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအားလုံးမှာ MPT ၏ Gateway တစ်ခုတည်းအောက်တွင် လုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ မည်သည့်လိုင်းကိုသုံးသုံး ကွန်နက်ရှင်နှေးကွေးလေးလံမြဲဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ချထားပေးသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းမှာ နှေးကွေးလွန်းပါသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုများ ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် လိုင်းအပြည့်မရခြင်း၊ ရေအောက်ကေဘယ်လိုင်းများနှင့် ထိုင်းဘက်မှ ကေဘယ်လိုင်းများကို ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် ရှိသော်လည်း လက်ရှိတွင် စက်ပစ္စည်းပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ Link ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်ရှိခြင်း၊ Bandwidth တိုင်း လိုအပ်သည့်နေရာသို့ အပြည့်မရောက်ရှိခြင်း စသည့်လိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၀န်ခံပြောကြားသည်။
“ရန်ကုန်နဲ့ ကေဘယ်ဆက်ကြောင်းက လိုင်းချိတ်ဆက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Transmission ပိုင်းတွေမှာလည်း အလုံအလောက်မရှိတော့ ဖြည်းဖြည့်ချင်းချဲ့ရတာ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကအပြည့်ပေးလည်း မရောက်တာမျိုးတွေ၊ လိုင်းနှေးကွေးတာမျိုးတွေဖြစ်နေတာ”ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ သီချင်းရောင်းတဲ့အခါ သုံးစွဲသူတွေဘက်က အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့ သီချင်းတွေဒေါင်းရတာ စိတ်မရှည်လို့ မ၀ယ်တာတွေကြုံရတယ်”ဟု မြန်မာတေးစီးရီးများကို အွန်လိုင်းမှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် Myanmar Music Store တည်ထောင်သူ ဦးကိုကိုလွင်ကပြောကြားသည်။
ကွန်နက်ရှင်လိုင်းများ ကောင်းမွန်မြန်ဆန်စေရန် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အ၀ပေးသင့်ပြီး ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိလာစေရန် အစိုးရက ပံ့ပိုးပေးခြင်းသာဖြစ်သင့်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းအားလုံးကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက တစ်ဦးတည်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်တော့ကြောင်း ဦးရဲမြတ်သူကပြောကြားသည်။
“ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမကောင်းတာကလည်း ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုမဖြစ်လို့ပေါ့။ ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိရင် သူလုပ်တာညံ့ရင် ကောင်းတဲ့သူဆီက ၀ယ်သုံးမှာပဲ။ အစိုးရကလည်း ဖိုင်ဘာတစ်မီတာကို သိန်း ၃၀ လောက်ယူတယ်။ အပြင်မှာ ၁၅ သိန်းဈေးပဲရှိတယ်။ အများကြီးများနေတယ်”ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။
အစိုးရကချုပ်ကိုင်ထားခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဘက်တွင်လည်း ၎င်းတို့အား လိုင်စင်ချထားပေးရန် ငွေကြေးအမြောက်အမြားသုံးစွဲနေရသည်။ ချုပ်ကိုင်မှုများမရှိတော့ပါက အာဏာပိုင်များကို ပေးရသည့်ငွေကြေးအား အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် လိုင်းများမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးရဲမြတ်သူကအကြံပြုသည်။
“ဆက်သွယ်ရေးက ဘာမှမလုပ်ရဘူး။ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့ Regulatory Body ပဲဖြစ်ရမယ်။ သူချပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို စရိတ်ခံပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမှာ။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံက လိုင်းမကောင်းရင် ဟောင်ကောင်တို့ စင်ကာပူတို့က လိုင်းတွေဝယ်မယ်။ ဒီမှာ Fiber တွေ ပြန်ဖြန့်မယ်။ အခုကျတော့ Fiber တွေကို ဆက်သွယ်ရေးကိုပဲအပ်ရ။ အစိုးရကပြန်ချပေးတဲ့ Bandwidth ကိုယူပြီး 512 ဘယ်နှလုံးဆိုပြီးကန့်ရောင်းရတာ။ အစိုးရက လွှတ်တဲ့ဟာမပြည့်ရင် ကိုယ်လည်းမပြည့်တော့ဘူး။ MPT က လက်ဝါးကြီးအုပ်နေတာ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသည့် Telenor နှင့် Ooredoo ကုမ္ပဏီတို့က International Gateway များ ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော်လည်း နည်းဥပဒေမထွက်သေးသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ မစတင်နိုင်သေးပေ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး ရက်ပေါင်းကိုးဆယ်အတွင်း နည်းဥပဒေထွက်ရှိရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး ဇန်န၀ါရီအတွင်း နည်းဥပဒေထွက်ရှိလာမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်းဦးကပြောသည်။
ယင်းနည်းဥပဒေအရ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ (ISP)များအားလုံးကို အဆိုပါနည်းဥပဒေတွင် လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပြီး International Gateway များကိုမူ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အစိုးရအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့် ခွင့်ပြုပေးမည်ဟုပါရှိကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသည်။
“ISP လိုင်စင်ချပေးတာနဲ့ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပကပါ လုပ်မယ့်သူတွေ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီကျရင် ၀န်ဆောင်မှုတွေပြိုင်ဆိုင်လာပြီး အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပိုကောင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
“အင်တာနက်လိုင်းကျသွားရင် အဓိကခက်ခဲတာက အီးမေးလ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တို့မှာလည်း သတင်းတွေ Update တင်တဲ့အပိုင်းမှာ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ မဖြစ်တာတို့ဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကျသွားတာနဲ့ မိုဘိုင်းနဲ့လှည့်သုံးရတယ်။ မိုဘိုင်းလည်း လိုင်းကျတယ်ဆိုပေမယ့် မရတဲ့အဆုံးသုံးရတာပဲ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
အိုင်တီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းကို အပြောင်းအလဲတစ်ခု၊ အရွေ့တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းအရွေ့ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အဓိကကျသည့် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်က မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါ။ ယခုဆောင်းပါးအတွက် အင်တာနက်သုံးစွဲသူများထံ မေးမြန်းရာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မကောင်းခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပေးရသည့်ငွေကြေးနှင့် ထိုက်တန်သည့် မြန်ဆန်သွက်လက်သော ကွန်နက်ရှင်ကို လိုချင်ကြောင်း ဖြေကြားပြောဆိုကြသည်။
ယခင်အခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြို့ကြီးများသာမက နယ်ဒေသများတွင်ပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအချို့တွင် ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများ ရှိလာခြင်းက ကမ္ဘာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မည့် အခြေခံအပြောင်းအလဲတစ်ရပ်၏အစဟု မြင်မိကြောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ခေတ္တပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ဆောင်းပါးရှင် မခင်မေဇော်ကဆိုသည်။ သုံးစွဲသူ သိန်းချီတိုးလာသော်လည်း အင်တာနက်မြန်နှုန်းမကောင်းပါက လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်တိုးတက်မည်မဟုတ်ပါ။
“မြန်မာပြည်မှာလည်း အင်တာနက်လိုင်းကောင်းလာဖို့ဆိုတာ အချိန်တစ်ခုတော့ စောင့်ရဦးမယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ မီးပျက်တာကအစ ဆုံးရှုံးမှုအလိုက် တရားစွဲလုိ့ရတယ်။ ဒီမှာက အဲလိုလည်းမရဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ ဆုံးရှုံးတာများနေပါတယ်”ဟု ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်ဦးမင်းဦးကပြောကြားသည်။
ရေးသားသူ- အေးသူစံ၊ ဆွေမွန်၊ ဇော်မျိုးလှိုင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိန်းဂဏန်း၊ စာရင်းဇယား အတိအကျပြုစုထားခြင်းမရှိသော်လည်း ရောဂါအမည် မှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများနှင့် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော ကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) နီးစပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှ အသိအကျွမ်းတစ်ဦးတွင် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခု ခံစားရသောကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသသည့်အခါ ကျွမ်းကျင်သည့်ဆေးပညာရှင်က ရောဂါအမည်မှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်မှုကို ကြုံဖူးပါသလား။
“ဖျားလို့ဆိုပြီး ဆေးခန်းသွားပြတာ။ ငှက်ဖျားဆိုပြီးကုတာ တစ်လကျော်ကြာတယ်။ ငှက်ဖျားဆေးတွေသောက်လိုက်ရတာ ဆံပင်တွေတောင်ကျွတ်ကုန်တယ်။ နောက်ကျမှသိတာ အဆုတ်အအေးပတ်ပြီး ဖျားတာတဲ့”ဟု မြန်မာနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီးဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးက ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် သူ၏အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြပါသည်။
ကိန်းဂဏန်း၊ စာရင်းဇယား အတိအကျပြုစုထားခြင်းမရှိသည့် ယင်းကဲ့သို့ ရောဂါအမည်မှားယွင်းစွာ ဆုံးဖြတ်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများနှင့် မစိမ်းသော ကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည်။
သာမန်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ရန် အချိန်ခြောက်နှစ်၊ ခုနစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရပြီး အထူးကုအဖြစ် ရပ်တည်မည်ဆိုပါက အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်ကျော် လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည့် ဆေးပညာများက ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အာမခံချက်ပေးနိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်က ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပြဿနာများတွင် ရောဂါအမည်မှားယွင်းစွာ ဆုံးဖြတ်မှုများရှိနေပြီး လူနာရှင်များက ဆေးပညာရှင်ဆရာဝန်များအပေါ် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာသည်။
ဆရာဝန်နှင့်လူနာ အချိုးအစားမမျှတမှုကြောင့် အချိန်ပေးမကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ ရောဂါအဖြေတစ်ခုအတွက် ကျွမ်းကျင်သည့်နယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက် လုံလောက်သော ခေတ်မီဓာတ်ခွဲခန်း စက်ကိရိယာမပြည့်စုံခြင်းက ပြည်တွင်းတွင် မလိုအပ်သော လူထုကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများက ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် အိမ်နီးချင်းပြည်ပနိုင်ငံများကို ပိုမိုအားထားလာကြရသည်။
“ရောဂါရှာဖွေရေးတွေ ဘာကြောင့်လွဲကုန်တာလဲလို့ပြောရင် နံပါတ်တစ်ကတော့ လူနာနဲ့ ဆရာဝန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရတဲ့ အချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက် ရောဂါရာဇ၀င်ကို သေချာမေးမြန်းပြီး အဖြေထုတ်ရတဲ့အခါမှာ လွဲမှားမှုတွေရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဆေးရုံအုပ်(ငြိမ်း) ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကပြောကြားသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကျော်လောက်က ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါက ဝှေးစေ့နေရာက အရမ်းကြီးပြီး ထူအမ်းအမ်းဖြစ်လာတော့ ဆေးခန်းသွားပြတော့ ခွဲရမယ်ပြောရော။ ခွဲရမှာလည်း ကြောက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အစ်မက ဘန်ကောက်သွားတော့ သူနဲ့လိုက်သွားရင်း တစ်ခါတည်း ဆေးဝင်စစ်ပြီးပြလိုက်တာ။ အသားတီဘီဖြစ်ပြီး ကြီးနေတာတဲ့။ ပုံမှန်ဆေးသောက်လိုက်တာ ပျောက်သွားတယ်”ဟု အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးမောင်အေးက ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြသည်။
ရောဂါတစ်ခုကို အမျိုးအမည်တပ်သောအခါ ဆေးပညာရှင်များအနေဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေကို အဓိကအားကိုးအားထားပြုကြရသည်။ သို့သော် ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းကို စစ်ဆေးသော အဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မရှိသေးပါ။ မြန်မာဆေးပညာရှင် ဆရာဝန်များကလည်း အဆိုပါအရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်အပြည့်အစုံ မရှိသော ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေများကို သိရှိနားလည်သောပညာရပ်နှင့် ပေါင်းစပ်၍ ရောဂါအဖြေကို ပေးနေရသည်။
“အစိုးရက ဆေးပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုတွေ အားနည်းတဲ့အတွက် စက်ပစ္စည်းတွေက ရောဂါရှာဖွေရေးမှာ ထိရောက်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုတွေရှိလာတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်သင်တန်းတွေမှာ မိုက်ခရိုစကုပ်တစ်ခုကို လူလေးယောက်လောက် ၀ိုင်းကြည့်နေရတော့ သေချာလေ့လာမှုတွေလည်း မရှိတော့ဘူး”ဟု ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်၏ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဆေးပညာရှင်အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း၊ လူနာနှင့်ဆရာဝန် ဆက်ဆံရေး၊ မပြည့်စုံသော စစ်ဆေးမှုများက ရောဂါအမည်မှားယွင်းခြင်းအတွက် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များ၌ပင် ရောဂါအမည်မှားယွင်းမှုများကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် လူဦးရေလေးသောင်းကျော် သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
“သင့်အနေနဲ့ အကြိမ်တော်တော်များများမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုတည်းကို ဆရာဝန်သုံးယောက်ကို ပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ရောဂါသုံးမျိုးဖြစ်နေပြီး ကုသမှုပုံစံသုံးမျိုးဖြစ်နေမယ်”ဟု အဆိုပါ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်စာတမ်းတွင် ရေးသားထားသည်။
“ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ စနစ်ရော၊ ပစ္စည်းရော ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူနာနဲ့ ဆရာဝန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ လိုလာမယ်။ အစိုးရရော ပုဂ္ဂလိကပိုင်းရော နည်းပညာပိုမြင့်တဲ့စက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပြီး အသုံးပြုလာရင် ဒီပြဿနာတွေ လျော့နည်းလာမယ်”ဟု ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကအကြံပြုသည်။
ပြည်သူလူထုက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းအသိပညာများ ပိုမိုလာခြင်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးပညာရှင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးနည်းစနစ်ပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေသည်ကို ထင်ရှားပေါ်လွင်လာစေသည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ကာလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ဆေးကုသသူ မြန်မာများ မရှိသလောက် ရှားပါးခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်တွင် တစ်နှစ်လျှင် လူဦးရေထောင်ဂဏန်းကျော်က ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ရှိ ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်နေကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ဆေးကုသမှု မြင့်တက်လာသည့်နည်းတူ အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် စင်ကာပူ၊ အိန္ဒိယနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံများသို့လည်း သွားရောက်ဆေးကုသသည့်ဦးရေ များပြားလာကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံတကာဆေးရုံများနှင့် ရုံးခွဲများမှ သိရသည်။
ထိုသို့ဆေးကုသမှု များပြားလာမှုတွင် ပြည်တွင်း၌ ဆရာဝန်နှင့် လူနာကြား နားလည်မှုလွဲမှားသည့်ပြဿနာများအပြီး ရုံးခွဲမှ နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်း သွားရောက်မှု ပိုမိုများပြားလာကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံတစ်ခု၏ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာရုံးခွဲမှ အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်တစ်ဦးကပြောသည်။
“လူနာကို အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်ဖို့လိုတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေလို တစ်ယောက်ကိုနာရီဝက် အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် လူနာနဲ့ ဆရာဝန် အချိုးအစားကွာဟချက်ကြီးနေတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး”ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
“Diagnosis(ရောဂါအမည်) တပ်တဲ့အခါမှာ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး နှစ်ခု၊ သုံးခုလောက်ကို စဉ်းစားတယ်။ ပြီးတော့ စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ ဆေးစစ်မှုတွေပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုထုတ်တယ်။ လူနာတွေအနေနဲ့ စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်”ဟု ဒေါက်တာစည်သူက ဆေးပညာလောကတွင် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ဆောင်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆရာဝန်တစ်ဦးလျှင် လူဦးရေနှစ်ထောင်နှုန်း အချိုးရှိသော ကျန်းမာရေးစနစ်လည်ပတ်မှုတွင် လုပ်အားဝန်ပိခြင်းများရှိနေပြီး လူနာကြည့်ရှုရန် အချိန်မလုံလောက်မှုများ ဆက်လက်တွေ့မြင်နေရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက ဆရာဝန်များအနေဖြင့် မိမိ၏ပြုစုကုသမှုကြောင့် မမျှော်လင့်ထားသော ဆိုးကျိုးများကျရောက်ခဲ့ပါက အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ လူနာအား အဖြစ်မှန်ကို အသိပေးပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် ရေတိုရေရှည်အကျိုးအကြောင်းများကို ရှင်းပြရမည်၊ လိုအပ်ပါက တောင်းပန်သင့်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းပေးထားသည်။
လွဲမှားသော ရောဂါရှာဖွေဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ကုသမှုများကြောင့် လူနာများအနေဖြင့် ငွေကြေးပိုင်းသာမက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများ ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး ဆရာဝန်များအပေါ်၌လည်း ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာရသည်။
ပြည်တွင်းရှိ အထူးကုဆေးရုံကြီးတစ်ခုတွင် ကုသခဲ့ပြီး သားအိမ်ထုတ်ရန် ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသစစ်ဆေးခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောပြသည်။
“ဟိုရောက်တာ့ ခြောက်လကြာရင် ပြန်စစ်ပါပဲပြောတယ်။ သားအိမ်ထုတ်ဖို့လည်း မလိုတော့ဘူး။ ဟိုသွားပြလိုက်မိလို့သာပေါ့”ဟု ဆိုသည်။
ရေးသားသူ- ၀တ်ရည်အောင်၊ ရဲနောင်
၁။ လက်ရှိပင်စင်ခံစားနေ သော အငြိမ်းစားများအား လက်ရှိ ပင်စင်လစာအပြင် ဝန်ထမ်းများ အား လစာတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုသည့် ကျပ် ၂ဝဝဝဝ အပေါ် ပင်စင်နည်း ဥပဒေနှင့်အညီတွက်ချက်၍ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ လစာမှစ၍ တိုးမြှင့် ခံစားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
၂။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိ မြို့ပြကာကွယ်ရေး ပင်စင်စားဦးရေ ၅၇၁၆၄၆ ဦး၊ စာရင်းရှိအင်အား၏ ၁ဝဝ ရာခိုင် နှုန်းအတွက် ပင်စင်လစာသစ်ထုတ် ယူခွင့်ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် များသို့ အကြောင်းကြား ဆောင် ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ်များ၌ ပင်စင်လစာထုတ် ယူရန် ကျန်ရှိဦးရေမှာ ၁ဝ၉၆၄၁ ဦး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာသစ် အား မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်များ တွင် ပိတ်ရက်မှအပ နေ့စဉ်ထုတ် ပေးလျက်ရှိပါသဖြင့် ဆက်သွယ် ထုတ်ယူကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
၄။ ပင်စင်လစာနှင့်ပတ်သက် ၍ အခက်အခဲရှိပါက ကာကွယ် ရေးပင်စင်စားများသည် သက်ဆိုင် ရာကာကွယ်ရေးငွေစာရင်းရုံးခွဲများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါရန်နှင့် မြို့ပြပင်စင်စားများသည် မိမိတို့ နှင့်နီးစပ်ရာ ပင်စင်ဦးစီးဌာနရုံး ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံးနှင့် ပြည် နယ်ရုံးများရှိ အောက်ပါဖုန်း/င်္ထေ နံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်သတင်း ပေးပို့ကြပါရန်နှင့် ပင်စင်ခံစားခွင့် ရရှိရေး အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် မွန်းတည့်နေသတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄၉)
ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့ ထုတ် The Hot News Journal PDF (Vol -4) (No - 169)
ဒီဇင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့ ထုတ် မော်နီတာသတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၈၃)
ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့ ထုတ် စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၆)
ဝမ်းချုပ်နေစဉ် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်သော အစားအစာများဝမ်းချုပ်တာဟာ လူတိုင်းမှာ ဖြစ် လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပါ။ လူတိုင်း ဆိုပေမယ့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ပုံစံ မျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းမသွားဘဲ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက် ကြာလာချိန် မှာတော့ ဝမ်းသွားရခက်ခဲမှု နဲ့အတူ ဝမ်းသွားချိန်မှာ စအိုက နာကျင် လာပါတော့တယ်။ အချိန်ကြာလာရင် စ အိုကွဲရာကနေ သွေးပါလာ တတ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားနေ ချိန်မှာ မစားသင့်တဲ့ အစား အစာတွေရှိ ပါတယ်။ ဖော်ပြပါအစားအ စာတွေကို စားမိရင် သင့်ကို ဝမ်းပိုချုပ်စေ တဲ့အပြင် မအီမသာဖြစ်စေပါတယ်။
ဆော်ဒါပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေ၊ ဟော့ဒေါ့နဲ့ ဟမ်ဘာဂါလို အစားအစာ တွေ၊ ချောကလက်နဲ့ ချောကလက်ပါဝင် တဲ့ အစားအစာတွေကို ဝမ်းချုပ်နေချိန် မှာ ရှောင်သင့် ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက် ပေါက်၊ ချိစ်နဲ့ ကိတ်မုန့်ခြောက်တွေကို ရှောင်ပါ။ ပီဇာတွေကိုလည်း အသီးအနှံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမျိုးကိုသာ စားသင့်ပြီး အ သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ အသားတွေထဲမှာ ကြက်သားနဲ့ ကြက် ဆင်သားလိုမျိုး အဖြူရောင်အသားတွေ ကိုသာစားသင့်ပြီး ကင်စားတာထက် ချက်ပြုတ်စားသောက်တာက ပိုကောင်း ပါတယ်။ အကင်စာတွေကို ရှောင်ပြီး ရေ ခဲနဲ့ ရေခဲမုန့်တွေကိုလည်း ဝမ်းချုပ်နေစဉ် မှာ ရှောင်ပါ။ အသင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အ စားအစာတွေကို ဝမ်းချုပ်နေစဉ် ခဏ ရှောင်ထားပါ။ ငှက်ပျောသီးနဲ့ ကာဗို ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့ အစားအစာတွေကို လည်းရှောင်ပါ။
ဝမ်းချုပ်နေစဉ်မှာ သံပရာသီးတစ် ခြမ်းကို ရေနွေးတစ်ခွက် ထဲမှာ ည§စ်ထည့် ပြီး တစ်နေ့တစ်ခွက်သောက်ပေးပါ။ ဂျုံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အချိုနည်းမုန့်တွေနဲ့ လတ် ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေကို စားပေးပါ။ စွပ် ပြုပ်၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ လိမ္မော်သီးနဲ့ ပျားရည်ရောထားတဲ့ ဖျော်ရည်မျိုးတွေကို သောက်ပေးပါ။ ဟင်းရွက်တွေနဲ့ ပြုလုပ် ထားတဲ့ စွပ်ပြုတ်မျိုးကတော့ ဝမ်းချုပ်နေ ချိန်မှာ အစားသင့်ဆုံး အစားအစာပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်နေချိန်မှာ ငါးလည်းစား ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်နေချိန် စားသင့်သော အစာစားနည်း ပုံစံ
ဝမ်းချုပ်နေချိန်မှာ အစာကို လျှော့ စားရမယ် ပိုစားရမယ် ဆိုပြီးမရှိပါဘူး။ ဒါ ပေမဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်း အစာများများစားတာ ကြောင့် တစ်နေ့တာလုံးအတွက် ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှုကို ကောင်းစေပါတယ်။ လူ တစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာလုံး လှုပ်ရှားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်က စွမ်းအင်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ မ နက်ခင်းအိပ်ရာက နိုးထလာချိန်မျိုးမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားချိန် လောင်ကျွမ်း ဖို့ အစာကောင်းကောင်းစားထားဖို့လိုပါ တယ်။ မဟုတ်ရင် စွမ်းအင်တွေကို ခန္ဓာ ကိုယ်က ထုတ်သုံးရတဲ့အတွက် မောပန်း လွယ်တတ်ပါတယ်။ မနက်စာစားပေး တာကြောင့် အစာလည်း ကြေလွယ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ် ပုံမှန်အလုပ်လုပ် နိုင်ပြီး ဝမ်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို ရပ်တန့်သွား စေကာ ပုံမှန် ဝမ်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
အစာစားချိန် မှန်ကန်မှုမရှိတာက လည်း သင့်ကို ဝမ်းချုပ်စေတဲ့ အကြောင်း ရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစာစားချိန် မ မှန်ကန်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အစာခြေစနစ်တွေက ပုံမှန်မဖြစ်ဘဲ ကြာ လာတဲ့အခါမှာ ဝမ်းချုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းစာကို ပုံမှန်စားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ နေ့လယ် အနပ်ကြီးတစ်နပ်ကို ဘယ်အ ချိန်မှာ စားမယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ပုံမှန် အဲဒီအချိန်အတိုင်း စားပေးပါ။
အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာ တွေက အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေ တာကြောင့်ပါ။ အမျှင်ဓာတ်က ဆာ လောင်မှုကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေတာ ကြောင့် အစာလျှော့စားနေသူ တွေအနေ နဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာကို ပို စားပေးသင့် ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်း သီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ ကို သောက်သုံးပေးပြီး ထမင်းစားချိန် တိုင်း ရေတစ်ဖန်ခွက် လောက်တော့ သောက်ပေးပါ။ စားတဲ့ ထမင်းဟင်းထဲမှာ လည်း ဟင်းချို၊ စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက် ပါဝင်အောင် စားသင့်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်း များကထွက်သော လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းများကြောင့် လူ့ကျန်းမာရေး ထိခိုက်သည် ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးခြင်း၊ ၀ိုင်ဖိုင် ချိတ်ဆက်ကာ အင်တာနက် သုံးခြင်း များကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည် ကင်ဆာ ရောဂါကို ဖြစ်ပွား စေသည်၊
အမျိုးသားများ မျိုးမအောင်ခြင်းထိ ဖြစ်ပွားစေ သည်ဟူသော ပြောဆိုချက် များသည် လုံးဝကို မှားယွင်း နေသော ပြောဆိုချက် များဖြစ်ကြောင်း နော်ဝေနိုင်ငံက ပြုလုပ် ထားသော စစ်တမ်းက အတိအလင်း ပြောကြား လိုက်သည်။
မိုဘိုင်း ဖုန်းများ မိုဘိုင်း တာဝါ တိုင်များမှ ထွက်သော အနိမ့်စား လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းများ၊ ၀ိုင်ဖိုင် ချိတ်ဆက်ကာ အင်တာနက် သုံးခြင်းမှ ထွက်လာသော သံလိုက် လှိုင်းများနှင့် ထိတွေ့ ပါများ ပါက လူ့အသား တစ်သျှူးစ များကို အပူဒဏ် သက်ရောက်ကာ ကင်ဆာ ဖြစ်စေသည်၊ အမျိုးသားများမှာ ထိုအပူဒဏ်ကြောင့် သုတ်ပိုးများ သေဆုံးကာ မျိုးမ အောင်ခြင်းထိ ဖြစ်ပွား စေသည်ဟု အခြားသော သုတေသန များက ဖော်ပြခဲ့ကြခြင်းသည် လွန်စွာ မှားယွင်း နေကြောင်း နော်ဝေ နိုင်ငံ ဆေးဖက် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ကော်မတီက တရားဝင် ထုတ်ပြန် ပြောကြား လိုက်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း တာဝါတိုင်များ၊ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ရေး တာဝါတိုင်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ ၀ိုင်ဖိုင် ချိတ်ဆက် အသုံးပြု ခြင်းများမှ ထွက်သော လျှပ်စစ် သံလိုက် လှိုင်းများ ကြောင့် ကင်ဆာမှ အစ အခြားသော ကျန်းမာရေး ထိခိုက် မှုများကိုလည်း လုံးဝ မတွေ့ရကြောင်း ထိုအဖွဲ့၏ စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်အတွင်း ကင်ဆာကျိတ်များ ဖြစ်ပွား လာစေနိုင်သည် ဟူသော အဆို သည်မှာလည်း မှားယွင်းကြောင်း ထိုအဖွဲ့က ဆိုသည်။ မိုဘိုင်း ဖုန်းများ ပေါ်လာသည်မှာ နှစ် ၂၀ ပြည့်တော့ မည်ဖြစ်ရာ ထိုနှစ် ၂၀ ကာလ တစ်လျှောက်လုံး မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးခဲ့ သူများကို စစ်ဆေးချက် အရလည်း မိုဘိုင်း ဖုန်းများကြောင့် ဦးနှောက် ကင်ဆာ ကျိတ်များ ဖြစ်ပွား လာသည့် ဆက်စပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မျှပင် မတွေ့ ရကြောင်းလည်း သိရသည်။
နော်ဝေ နိုင်ငံ တစ်ဝန်း မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲ သူများ မိုဘိုင်းဖုန်း လှိုင်းများကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ရှိမရှိကို စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင် ထားချက်များ အရလည်း မိုဘိုင်းဖုန်းများကြောင့် ကင်ဆာကဲ့သို့ ရောဂါ ကြီးကြီး မားမားများ မဖြစ်ပွားရုံ သာမက အခြား ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှု များကို ဆက်လက် ဖြစ်ပွား စေသော ကိုယ်ခံ အားဓာတ်များ ပြောင်းလဲခြင်း မျိုးကိုပင် ဖြစ်ပွား စေခြင်း မရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး စောင့်ကြည့် လေ့လာ မှတ်တမ်း တင်ထား ချက်တွေ အရတော့ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေ ၀ိုင်ဖိုင် စက်တွေနဲ့ အခြား ကြိုးမဲ့ နည်းပညာသုံး စက်ပစ္စည်း တွေက ထွက်တဲ့ အပျော့စား လျှပ်စစ် သံလိုက် လှိုင်းတွေကြောင့် လူတွေ ကျန်းမာရေး ထိခိုက် တယ်ဆိုတဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား သက်သေပြစရာ တစ်ချက်မှ မတွေ့ရပါဘူး''ဟု စစ်တမ်းကို ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့သူ ပါမောက္ခ ဂျန်အလက်ဇန္ဒားက ပြောသည်။
ထိုစစ်တမ်းကို နော်ဝေနိုင်ငံ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး သိပ္ပံက အတည်ပြု ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချရခြင်း အကြောင်းရင်းကို သိထားရင် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်း တွေနည်းသွားအောင် လုပ်နိုင် မည့်နည်း လမ်းများ ဖော်ဆောင် နိုင်ကြမည်။
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချ ရခြင်း အကြောင်းရင်းများ ထဲတွင် လူမှုဘ၀ အဆင် မပြေ မှုများက ထိပ်ဆုံး ကရှိနေသည်။ စစ်တမ်း ကောက်ယူ သုတေသန ပြုထားချက်များ အရ ကိုယ်ဝန် ရှိနေ ချိန်တွင် အလုပ်လက် မဲ့ဖြစ် သွားခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြို ကွဲသွားခြင်း၊ အိမ်ခန်း ငှားခများ မပေး ဆောင်နိုင်တော့ခြင်း၊ အိမ်ပေါင် မြေပေါင် ထားသည်များ ပြန်မရွေး နိုင်တော့ခြင်း စသည့် ဘ၀ လှိုင်းများ ရိုက်ခတ် လာခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်း များဖြစ်ပွား လာရကြောင်း တွေ့ရသည်။ လေ့လာမှု စစ်တမ်း ရလဒ် များကို Journal of Family Planning and Reproductive Health Care ဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ထားသည်။ ဘ၀လှိုင်းများ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်းများ ဖြစ်ပွားရ ခြင်းကို အကာအကွယ် ပေးရန်မှာ များစွာ ကျယ်ပြန့်သော အလုပ်ဖြစ်သည်။
ငရုတ်သီးပါ ဓာတ်ပစ္စည်း နာကျင် ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာ စေနိုင် ဟုဆို
ဒီနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကြီးကို သက်ကြီးကမ္ဘာ (Ageing World)လို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ် လာကြ ပါတယ်။ ဥရောပမှာ လူဦးရေရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသက်ကြီး သူတွေ ဖြစ်လာနေပြီး ၂၀၂၀ မှာဆိုရင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိလာ လိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။ အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင် သက်ကြီးရွယ်အို ဦးရေက ဥရောပ မှာထက် ပိုပြီးတောင် များနေပါတယ်။ အကြောင်းရင်း ကတော့ ကလေး မွေးဖွားနှုန်း လျော့နည်းတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းလာတာ၊ အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာများ လာတာ၊ ဆေးပညာ တိုးတက် ခေတ်မီ လာတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ များလာတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ဆိုပေမယ့် ကျန်းကျန်း မာမာ ရှိနေဖို့လည်း လိုအပ် နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသူတွေမှာ အဓိက လျော့နည်း တတ်တဲ့ အာဟာရ ဓာတ်တွေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို အဓိက စားသုံးနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လိူင် ကျောက်တော်နှင့် မြောက်ဦးသို့ သွားရောက်
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မနေ့က ရောက်ရှိလာတဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လိူင်နဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးတွေဟာ ဒီကနေ့မှာ ကျောက်တော်နဲ့ မြောက်ဦးမြို့ တို့ကို ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ သွားရောက်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ နံနက်မှာ ကျောက်တော်မြို့ရှိ စကခ (၉) ကိုရောက်ရှိလာပြီး ကျောက်တော် မဟာမုနိ ရှင်တော်မြတ်ကို တော့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့်မှာ ၀င်ရောက် ဖူးမျှော်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြောက်ဦးမြို့သို့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် ခန့်မှာ ရောက်ရှိလာပြီး ခမရ ၃၇၇ တပ်ရင်းကို သွားရောက် ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ရခိုင် ခရီးစဉ်မှာ တပ်မတော် (ရေ) ဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရသက်ဆွေ၊ တပ်မတော်(လေ) ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်တို့ အပါအ၀င် ဒါဇင်နဲ့ ချီတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း အတူ လိုက်ပါလာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိဖို့ တပ်မတော်က ကူညီနေကြောင်း ကာချုပ်ပြော
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိဖို့အတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီနေကြောင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အခုလို ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့လိုလားချက် တကယ်စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တကယ်ဖြစ်ချင်တယ်၊ လူထုကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာက ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါ၊ ကျနော်တို့တကယ်လို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုကို သွားချင်တယ်၊ ဖြစ်ချင်တယ်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီးမှ သာယာတဲ့တိုင်းပြည်၊ တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဒီနေ့ကျနော်တို့က မရရအောင် ထိန်းကျောင်းပြီးတင်ပေးနေတယ်၊ တစ်ဖက်ကလည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရမယ်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိရမယ်၊ စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်"
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့လိုအပ်သလို အားလုံးတညီတညွတ်တည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် မိမိတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မလွဲမသွေရောက်ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကို ကောင်းမွန်အောင်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အဲဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာ ရှေ့ဆက်ပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အလှူရှင်တွေက ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၈၆၀၀ ကျော်ကို ပြည်နယ်အစိုးရကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ပိုင်ရှင်မဲ့ မြန်မာအမျိုးသားနှစ်ဦး ရုပ်အလောင်း မလေးရှားဆေးရုံတွင် သောင်တင်နေ
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆီလန်ဂေါပြည်နယ် ကလန်းမြို့နယ်ဆေးရုံတွင် ထားရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသား အလောင်းနှစ်လောင်းမှာ ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေသောကြောင့် သုံးပတ်ကြာမြင့်သည်အထိ မသင်္ဂြိုဟ်ရသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သေဆုံးသူနှစ်ဦးမှာ အသက် (၂၀) ၀န်းကျင်အရွယ်နှင့် အသက် (၄၀) ၀န်းကျင်အရွယ်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က မလေးရှား နိုင်ငံ ကလန်းမြို့အနီးတွင် ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည့် အလောင်းများဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
““ကျွန်တော်တို့ကလည်း အဲဒီအသက်ရွယ်ပုံစံတူနှစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးနေလို့ ဟုတ်လားလို့ သွားကြည့်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာနေတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်တွေကတော့ မြန်မာရုပ်တွေပါ။ ဆေးရုံမှာထားထားတာ တော်တော်ကြာပြီပြောပါတယ်။ ပိုင်ရှင်မရှိသေးလို့ မသင်္ဂြိုဟ်ရသေးပါဘူး”” ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ကလန်းမြို့ဆေးရုံ၌ မြန်မာနိုင်ငံသား အလောင်းနှစ်လောင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲသူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား (မလေးရှား)မှ ကိုအောင်ကြီးက ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသော အလောင်းများကို ပိုင်ရှင်ပေါ်ပေါက်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ပေးမှသာ သင်္ဂြိုဟ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရက်အတော်ကြာအထိ လာရောက်မဆက်သွယ်၊ ပိုင်ရှင်မရှိပါက နားလည်မှုဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်ကြလေ့ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်က မြန်မာအချင်းချင်းပြန်ပေးဆွဲပြီး ကျပ်သိန်းနှစ်ရာဖြင့်ရွေးရန် တောင်းဆိုရာတွင် ကျပ်သိန်းတစ်ရာ ငွေလွှဲပေးသော်လည်း ပြန်ပေးဆွဲခံရသူနှစ်ဦး တစ်လကြာသည်အထိ ပြန်ရောက်မလာသေးသော အမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားနေသည်။ ပြန်ပေးဆွဲသွားသော မြန်မာအမျိုးသားလေးဦးကို မဖမ်းဆီးနိုင်သေးသလို ဓားစာခံနှစ်ဦးမှာလည်း မလွတ်မြောက်သေးသည့်အတွက် အစောပိုင်းတွင် ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းနှစ်လောင်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရသောတူအရီးများ ဖြစ်နေမည်လားဟု ခန့်မှန်းမှုများရှိခဲ့သည်။
သမ္မတအရည်အချင်း ဥပဒေပုဒ်မ ပြင်သင့်၊ မသင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်မည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ခွင့် အတွက် အတားအဆီး ဖြစ်နေသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် ပုဒ်မ (၅၉(စ)) ကို ပြင်ဆင်ရန် သင့်၊ မသင့်ကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီအစည်း အဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောကြားသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပါတီအတွင်း သီးခြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ပြင်ဆင်ရန်သင့် မသင့်ကို ဗဟို ကော်မတီဝင်များ အားလုံး ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စများဆုံးဖြတ်မည့် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့် ရက်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။
"အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို မူဝါဒပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ အချိန်ကတော့ အတိအကျပြောလို့မရဘူး" ဟု ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
အခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၅၉ (စ)သည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမျှတမှု ရှိစေရေး အတွက် ပြင်သင့်သော ပုဒ်မတစ်ခု ဖြစ်ပြီး NLD ပါတီမှ အဆိုပါ ပုဒ်မကို ပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော်သို့ အသေအချာ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
"ပြင်မယ်ဆိုရင် တရားမျှတဖို့ အတွက် အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့က ကြိုဆိုပါတယ်" ဟု ၄င်းက ပြောဆိုသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အခြေခံဥပဒေ လေ့လာဆန်းစစ်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဆိုပါ အခြေခံဥပဒေပါ တွေ့ရှိချက်များကို ပြင်ဆင်ရန် ဗဟိုကော်မတီ၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းပါတီထံမှ သိရှိရသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သော ပုဒ်မ ၅၉ (စ)သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော် သမ္မတရာထူး အတွက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်နေသောကြောင့် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားထားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတ များသည် မိမိကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ မိဘတစ်ပါးပါးသော် လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော် လည်းကောင်း မိမိ၏ တရားဝင်သားသမီး တစ်ဦးဦးသော် လည်းကောင်း၊ ထိုတရားဝင် သားသမီးတစ်ဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော် လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံယူစောင့်ရှောက် ရိုသေသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသား လက်အောက်ခံသူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသား မဖြစ်စေရ၊ ထိုသူ များသည် နိုင်ငံခြားအစိုးရ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သူ သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားသော်လည်း ကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေးများနှင့် ကျေးဇူး ခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့် ရှိသူများ မဖြစ်စေရဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအများဆုံး အနိုင်ရရှိ ထားပြီး လွှတ်တော်တွင်း ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ရရှိထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၂၅၉ ဦးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၁၂၉ ဦး ရှိကြောင်း လွှတ်တော် စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။
စိုးမြတ်သူဇာနှင့် နဝရတ် ရဲစစ်ချက်မှတ်တမ်း ဟူ၍ Facebook တွင် တင်ထားခြင်း ရပ်တန့်ရန် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး တောင်းဆို
အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာနှင့် နဝရတ်တို့ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်နွှယ်ခဲ့သည် ဟုဆိုသော ရဲစစ်ချက် မှတ်တမ်းများဟု ယူဆရသည် များကို နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့နှင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က Facebook လူမှုကွန်ရက်တွင် Moe Zay Nyein အမည်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် တစ်ချိန်က အနုပညာရှင် အချို့ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ယင်းသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရ လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးအရ လည်းကောင်း ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် ထားရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ယင်းလျှို့ဝှက် ထွက်ဆိုချက်သည် ယခုအခါ အွန်လိုင်းလူမှုရေး ကွန်ရက်စာမျက်နှာ (Facebook) ပေါ်တွင် ရောက်ရှိရုံမျှသာမက ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်အချို့တွင်ပါ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက် သဖွယ် ကူးယူ ဖော်ပြလာသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယင်းအတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လုံးဝပတ်သက်ခြင်း မရှိသော အနုပညာရှင်များ၊ ပတ်သက်မှု ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် လမ်းမှန်သို့ လျှောက်လှမ်းရန် ကြိုးစားနေကြသော အနုပညာရှင်များ နှင့်တကွ မိသားစုများပါ ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်း ထိခိုက်ကြရသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အနေနှင့် အထက်ပါ လုပ်ရပ်များကို ရပ်တန့်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
Moe Zay Nyein ဆိုသူ တင်ထားသည့် အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာ၏ ရန်ကုန် မူးယစ်အရှေ့ အထူးအဖွဲ့ စစ်ဆေးချက်ဟု ဆိုသည့် မှတ်တမ်းတွင် စိုးမြတ်သူဇာ ကိုယ်တိုင် ရာမဆေးပြားနှင့် WY ဆေးပြားသုံးစွဲကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတ နယ်ပယ်မှ ယင်းဆေးပြားများ သုံးစွဲမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အနုပညာရှင်များ၏ အမည်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
သရုပ်ဆောင် နဝရတ်၏ အစစ်ခံချက် ဟူ၍ တင်ထားသည့် မှတ်တမ်းတွင်လည်း Ecstay နှင့် WY ဆေးပြားများ သုံးစွဲကြောင်း ဖော်ပြမှုနှင့် အတူ ၄င်း၏အမည်နှင့် ဆက်နွှယ်၍ တပ်မတော်အရာရှိ အချို့၏ သားသမီးများနှင့် အနုပညာရှင် အချို့၏ အမည်များ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်သူဇာ၏ အမည်နှင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ရဲစစ်ချက် မှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၄င်းက ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ၄င်း၏ Facebook မှတစ်ဆင့် ပြောကြားရာတွင် အဆိုပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး နာမည် ပါခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အတွက် တောင်းပန်ကြောင်း၊ Moe Zay Nyine Account ပိုင်ရှင်ကို မသိရှိသလို မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ခဲ့သည်ကို နားမလည်ကြောင်း၊ ယင်း Account ပိုင်ရှင် တင်ထားသည့် အကြောင်းအရာ များကို တစ်ဦးတစ်ယောက် ကမျှ မထောက်ခံထား သည့်အတွက် လုံးဝ အမှန်ဟု မယူဆသင့်ကြောင်း၊ အနုပညာရှင် များ၏ အမည်များ ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် အများကြီး ထိခိုက်နစ်နာစေပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း သံသယကြောင့် ရင်းနှီးမှုကို ပျက်ပြား စေကြောင်း၊ ၄င်းသည် ယနေ့အချိန်အထိ မည်သူ့ကိုမျှ ထိခိုက်နစ်နာအောင် မလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအကြောင်းအရာများ အွန်လိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ သည့်အတွက် မိမိနှင့် ပတ်သက်သော မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပရိသတ်များ အားလုံး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ခဲ့ရသလို ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ထိခိုက် နာကျင်ရကြောင်းနှင့် ၄င်းသည် ၄င်း၏ ရပ်တည်မှု အတွက် လိပ်ပြာသန့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လယ်သမားများနှင့် အမှုဖြစ်နေသော ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးရှိန်အမှု ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိ ကိုင်တွယ်မည်
နေပြည် တော်တွင် လယ်သမားများနှင့် အမှုဖြစ်နေသော ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုး ရှိန်အမှုကို ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိ ဥပဒေအတိုင်း အမှန်အတိုင်းကိုင် တွယ်ဆုံးဖြတ်မည်ဟု နေပြည် တော်မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိ တစ်ဦး က ပြောသည်။ အဆိုပါ အဆင့်မြင့်အရာ ရှိက ''ပြည်သူတွေကတော့ထင် ကြမယ် ဒီအမှုကို ဘက်လိုက်မှု တွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေအ တိုင်းပဲဆုံးဖြတ်မှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ တပ်ဖွဲ့ကဖြစ်စဉ်မှန် အတိုင်းစုံစမ်း ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူအပြစ် ပေးမှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ ဒီအမှုက ဆက်စစ်နေတုန်းပဲ''ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ် ဇူလိုင်၆ရက်က လယ်ဝေးမြို့နယ် ပေါက်မြိုင် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းတိုင်သာရွာ ရှိ ကိုအောင်သန်းဦးလယ်မြေ သို့သွားရောက်ကာ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးရှိန်က သေနတ်ပြပြီး ''ငါ့မြေ ကိုဝင်လုပ်ရင် ပစ်သတ်မည်''ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးရှိန် ၏ တပည့်ဗိုလ်မှူးလှိုင်မျိုးဝင်း က တောင်သူမခင်တင့်၏ လယ် သို့ရောက်လာပြီး မခင်တင့်၏ရင် ဘတ်ကိုဆွဲကာ လက်သီးဖြင့် ထိုး ရန်ကြံစည်ခဲ့သောကြောင့် ကာယ ကံရှင်နှစ်ဦးက သက်သေများနှင့် အတူ လယ်ဝေးရဲစခန်းသို့ စာရေး ကာ တိုင်ကြား ခဲ့ကြောင်း၊ အဆို ပါအမှုကို လယ်ဝေးရဲစခန်းက ဩဂုတ် ၁၂ရက်မှ စတင်ကာစစ် ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တိုင်ကြားခံရသည့်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးရှိန်မှာ အငြိမ်း စားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ကိုယ်ရံ တော်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေတစ်ဦး က''အမှန်အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ ပဲဆုတောင်းရမှာပဲ။ နစ်နာသူက နစ်နာတယ်လို့ တိုင်ကြား တာကို ရဲစခန်းနဲ့ တရားရုံးက အမှန်အ တိုင်း ဘက်မလိုက်ဘဲဖြေရှင်းရဲ တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်''ဟုပြောသည်။ တရားပြိုင်ဘက်မှ တာဝန် ရှိသူများကို ရန်ကုန်တိုင်းမ်နေ့စဉ် သတင်းစာမှ အချိန်မီဆက်သွယ် သော်လည်း ဆက်သွယ် မှုမရခဲ့ ပေ။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း နမ့်စန်မြို့နယ်ရှိ ယင်းနက် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ ၂၀ ရွာမှ လူငယ်များ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် နမ့်စန်မြို့နယ်ရှိ ကုန်းလမ်းကျေးရွာ၌ ခွပ်ဒေါင်းအားမာန်အမည်ဖြင့် မူလတန်းကျောင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပညာရေးကွန်ရက်က ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်သည်။
ယင်းနက် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှ ကျောင်းသားလူငယ်များသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ မူလတန်းကျောင်းမရှိခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းရှိရာနှင့် နေထိုင်ရာဝေးလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေးနေမှုများရှိနေသည်ဟု NLD ပညာရေးကွန်ရက် နမ့်စန်တာဝန်ခံ ဒေါ်ဝင်းမြင့်မြတ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“စာသင်ဖို့ထက် အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွေကလည်း ခက်ခဲ တော့ ဒေသက ဘာမှ မဖွံ့ဖြိုးဘူး။ စားဝတ်နေရေး အတွက်ပဲ မိသားစုလိုက် ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ စာသင်ဖို့ဆိုတာ သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရမူလတန်း ကျောင်းမရှိတာလဲ ပါတာပေါ့” ဟု ပြောကြားသည်။
ခွပ်ဒေါင်းအားမာန် မူလတန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသူ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၈၀ ဦးအား စတင်ပညာသင်ပေးလျက်ရှိပြီး ၅ နှစ်မှ ၁၅နှစ် အရွယ်များဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် သူငယ်တန်း တစ်တန်းသာ သင်ကြားနိုင်သေးပြီး ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ် တွင် ပထမတန်းအား ဆက်လက်ဖွင့်နိုင် ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ဒေါ်ဝင်းမြင့်မြတ်က ဆိုသည်။
ထိုကျောင်းတွင် ဆရာမနှစ်ဦးဖြင့်သာ သင်ကြားပေးနိုင်သေးပြီး ဒီဇင်ဘာ လကုန်တွင် NLD ပညာရေးကွန် ရက် နမ့်စန်မှ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် လုပ်အား ပေးသင်ကြားရန် ဆရာမနှစ်ဦး ထပ်မံပို့ ဆောင်ပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိ ခွပ်ဒေါင်းအားမာန် မူလတန်းကျောင်း တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာမ နှစ်ဦးကို ရွာမှစုပေါင်း၍ လစာငွေပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ဓမ္မာရုံတွင် စတင်သင်ကြားပေးနေပြီး စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် NLD ပညာရေးကွန်ရက်မှ စီစဉ်နေaကြာင်းသိရသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်သွားရန် အများသုံး သောက်သုံးရေကန်များလည်း တူးဖော် ပေးသွားရန် ကျေးရွာအကျိုး ပြုအဖွဲ့က လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
လှိုင်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ခရီးသည်ကျား (၁၃)ဦး ဒဏ်ရာရ
၃.၁၂.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၀၄၅အချိန် လှိုင်မြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း အတိုင်း မြောက်မှတောင်သို့ ယာဉ်မောင်း (စုံစမ်းဆဲ)မောင်းနှင်လာသည့် 7F/5650 KIABONGO လိုက်ထရပ်အပြာရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် ဘုရင့်နောင်စစ်ကြောရေးရုံးအနီးအရောက်တွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းယာဘက်စပ်သို့ တိမ်းမှောက်သွားခဲ့သဖြင့် ယာဉ်မောင်းမှာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် ယာဉ်ကိုထား၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ၎င်းယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည် ၀င်းနိုင်ထွန်းပါကျား (၁၃)ဦးတွင် ဒဏ်ရာများအသီးသီးရရှိသဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အသီးသီးဆေးကုသမှုခံရသဖြင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်
မောင်းနှင်သူ ယာဉ်မောင်း (စုံစမ်းဆဲ)အား ပိတောက်ချောင်းနယ်မြေ ရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၂၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၃၈/၂၀၂ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး တရားခံဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
AGTI အောင်ထားသူများအတွက် B-Tech ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပရန် တောင်းဆိုမည်
စနစ်သစ် ပြောင်းလဲတော့မည်ဖြစ် ၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ AGTI အောင်ထားသူများ B-Tech ဝင် ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်အား ယခုနှစ်တွင် ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ လက် မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုသွားမည်ဟု သိရ သည်။
၄င်းတို့အနေဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆို ခွင့်မရပါက များစွာနစ်နာကြောင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကိုသာ ရရှိချင်သည့် အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရွေးချယ် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သန် လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုတင်ကိုကိုက ဆိုသည်။
AGTI အောင်ထားသူများအနေ နှင့် ယခုနှစ်များတွင် ဖြေဆိုရန် မဖြစ် နိုင်ကြောင်း သန်လျင်နည်းပညာ တက္က သိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
''အပြင်မှာကြားသလို ဝင်ခွင့်စာ မေးပွဲက ၄ နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ်လို့ တရားဝင်စာထုတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး'' ဟုကိုတင်ကိုကိုက ပြောသည်။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိရန် မြို့အသီးသီးရှိ AGTI နှင့် B-Tech အောင်ထားသူများထံ လက်မှတ်လိုက်လံ စုဆောင်းလျက်ရှိပြီး ယခုအချိန်အထိ ကျောင်း ၃ဝဝ ကျော် လက်မှတ်ရရှိထား ပြီး ကျောင်းသားဦးရေ ၁ဝဝဝ ပြည့်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ ထံတင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦး သိန်းညွန့်က အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ပထမအကြိမ် နဝမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်းမေး သွားမည်ဟု ပြောသည်။
စနစ်ဟောင်းတွင် AGTI နှစ်နှစ်၊ B-Tech ၂ နှစ်၊ BE ၁ တစ်နှစ်သင် ကြားရပြီး မကြာမီပြဋ္ဌာန်းမည့် စနစ် သစ်တွင် B-Tech ၄ နှစ်၊ BE ၂ နှစ် သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်သစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါက AGTI များအနေ နှင့် ပါဝင်တော့မည်မဟုတ်ခြင်းကြောင့် ယခုလို လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြသည်။ သတင်းထူးသတင်းဦးဆိုပါက ပို၍ပင် စိတ်ဝင်တစားရှိတတ်ကြသည်။ သတင်းဆိုသည်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မဖြစ်ပေါ်ဖူး သော အဖြစ်အပျက်ဟုဖွင့်ဆိုထားရာ ယင်းကဲ့သို့တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မဖြစ်ပျက်ဖူး၊ မပေါ်ပေါက်ဖူးသော သတင်းမျိုးဆိုပါက ပို၍ပို၍ပင် စိတ်ဝင်စားကြမည်ကမလွဲ။
လတ်တလောတွင် ထိုကဲ့သို့သတင်းထူးသတင်းဦးများစွာအနက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ငလျင်တစ်ခုကဲ့သို့ လှုပ်ခတ်တုန်ခါသွားစေခဲ့သော သတင်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ ထိုသတင်း၏အသွင်ပိုထူးခြားစေခဲ့သည်က လျှို့ဝှက်အပ်သောအရပ်မှ ပေါက်ကြားခဲ့သော သတင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။
”ဟိုးအစောပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း အစစ်ခံခဲ့ရဖူးတာပဲ။ အမှားက တော့ကင်းတဲ့သူ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီဟာမကောင်းဘူးဆိုတာ သိလို့ လမ်းမှန်လျှောက် နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ တရားဥပဒေကိစ္စကတော့ ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဒီဟာက စစ်ဆေးတဲ့ဟာ အပြင်ထွက်လာတယ်ဆိုတာက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ အပြင် ထွက်လာတော့ ရှုပ်ကုန်တာပေါ့။ မဟုတ်ဘဲ အစွပ်စွဲခံရသူတွေက ငြင်းတာအကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် ဟုတ်နေတဲ့သူတွေ ငြင်းတာကတော့ ပြဿနာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လျှို့ဝှက်အပ်တဲ့ မပေါက်ကြားသင့်တဲ့အရာကတော့ အခုလိုပေါက်ကြားတာ လုံးဝ မသင့်လျော်ဘူး။ အမှားကို ဆက်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ သတိပေးလိုက်တဲ့ သဘောတော့ ရှိနိုင်ပေမယ့် အရင်က မှားခဲ့တဲ့အမှားကိုသိပြီး အမှန်ကိုလျှောက်နေ တဲ့သူတွေ ခြေလှမ်းတုံ့ဆိုင်းသွားနိုင်တယ်”ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လူမှုရေးကိစ္စများကို ကိုယ်အား စိတ်အား ထက်သန်စွာဆောင်ရွက်နေသူ ဦးကျော်သူက ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့်အနုပညာရှင် များနှင့်
မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စအပေါ် သူ၏အမြင်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါသည်။
အဆိုပါ အနုပညာရှင်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည်ဆိုခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူတို့၏ အမည်စာရင်းပါ ရဲစစ်ဆေးချက်၌ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ အဆိုတော်သုံးဦး အမည် စာရင်းတွင် ပါဝင်နေသည့် သားဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားသာမက ရုပ်ရှင်လောကတစ်ခုလုံး ကိုယ်စား ပြောကြားသူ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးဇင်ဝိုင်းက ”ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် မင်းမော်ကွန်းဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဇင်ဝိုင်းအနေထက် ရုပ်ရှင် လောကသားတစ်ဦးအနေနဲ့ လောကတစ်ခုလုံး ကိုယ်စားပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော် တို့ သိသလောက် ဒီစစ်ဆေးချက်က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကာလတုန်းက ဒီနှစ်ယောက်တည်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာရှင် တော်တော်များ များကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ ကျွန်တော့်သား အပါအဝင်ပါပဲ။ ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး စစ် ဆေးချက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ချက်၊ စစ်ဆေးချက်တွေ ဆိုတာ ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးအရပဲဖြစ်စေ လျှို့ ဝှက်ထားရမယ့် ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီကိစ္စပေါက်ကြားလာတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါ သလဲ မေးချင်ပါတယ်။
ဒီလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ် တက်လာတာနဲ့ သတင်းကို ပုဂ္ဂလိကစာနယ်ဇင်းတွေက ဖော်ပြတာရှိတယ်။ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှ ဖော်ပြတာ လား ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ပြည့်တန်ဆာခန်း ထောင်ထားသူ ဇင်ဝိုင်းလို့ စာတစ်ကြောင်းကိုFacebook ပေါ်မှာ တက်လာရင် ပေါ်ပြူလာကတင်လာ မယ်ဆိုပါတော့ ကျွန်တော့်ကို အတည်ပြုမေးရပါမယ်။ အဲဒါက အတည်ပြုချက်မပါဘဲ ပါလာရင် လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ကျင့်ဝတ်အပိုင်း ပါသွားပြီ။ ဒါကိုတော့ ထားလိုက်ပါ။
ခေတ်စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲနေတဲ့ကာလမှာ အားလုံးက နေသားတကျ မှားယွင်းမှု ကို နားလည်ပါတယ်။ အခု အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာမည်စာရင်းတွေက အနုပညာသည်တွေ မကပါဘူး။ မူးယစ်ဆေး ဝါးအန္တရာယ်ဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တော်အတွက် ကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ လူငယ်တွေကြားမှာ သူတို့ ပတ် ဝန်းကျင်က စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဘဝတက်လမ်းအတွက် အကျိုးပြုစေတဲ့ အချက်များရှိနေတာထက် မူးယစ်ဆေးဝါး အရက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းမည်း၊ နံပါတ် ၄၊ ရာမ အစုံ အစုံ လက်လှမ်းတမီမှာ ရှိနေပါတယ်။ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အများအမြင်မှာ ဒီကလေးတွေ ဒီလူစာရင်းတွေဟာ တရားခံလို့ မြင်ကြပေမယ့် ကျွန် တော် ကတော့ ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်လို့ပဲမြင်တယ်။ အနုပညာလောက ရယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းမော်ကွန်းအတွက် ပြောခြင်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူငယ်ထုတွေကို အမြန်ဆုံးမူးယစ်ကျွန်ဘဝမှ အမြန်ဆုံး ကယ်တင်ပေးကြပါ။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇင်ဝိုင်းအနေနဲ့ တောင်းဆိုတာပါ။ မူးယစ် ရာဇာတွေက လူကုံထံရပ်ကွက်ထဲမှာ နန်းတော်တမျှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တိုက် ကြီးတွေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကား ၁၄ စီး ၁၅ စီးနဲ့ တဝီးဝီးစီးနေကြတဲ့ မျက်လုံးမည်း မည်း အသား နီစပ်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘိန်းဖြူဘိန်းမည်းက အစရောင်းတာကို ပဲပြုတ်သည် သာမက ဆိုက်ကားသမားပါသိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများက မသိကြ တာ၊ မတွေ့ ကြတာ၊ သတင်းမရကြတာကတော့ အလွန်အံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ်”
၂ဝဝ၈ခုနှစ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ဖြန့်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးစစ် ဆေးခဲ့မှု ရဲမှတ်တမ်းတစ်ခု ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် လက်ရှိနာမည်ရ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်နေခြင်းက သတင်း၏တန်ဖိုးကို ပိုမြင့်မားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ သိရန်ခဲယဉ်းသော အရေးယူစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းတစ်ခု ပေါက်ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာသကဲ့သို့ ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများလည်း ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဓိကထောက်ပြကြသည်က လူ့အခွင့် အရေး နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ။
ထိုသတင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ထုတ်ဖော်တင်ခဲ့သူကတော့ ယခင် ကာလ ဥပဒေစီရင်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အာဏာလွှမ်းခဲ့သည့်အတွက် အရေးယူမှုများ ပေါ့လျော့ဖုံးဖိခဲ့သည်ကို သိရှိရန်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် လတ်တ လောရပ်တည်နေကြသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြား ဖြစ်ခဲ့ သည်ဟု ဝေဖန်မှု များက ပို၍ညံလာခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် သရုပ်ဆောင်လူမင်းက ထိုသတင်းပေါ်ပေါက်ပြီး မရှေးမနှောင်းတွင်ပင် ၄င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှနေ၍ ငြင်းဆို ကန့်ကွက်ေ ကြာင်းတင်ခဲ့ပြီး စိုးမြတ်သူဇာကလည်း ၄င်း၏သဘောထားကို တင်ခဲ့သည်။ သို့အတွက် အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာနှင့် ဒါရိုက်တာမိုက်တီးတို့၏ ဖေ့စ် ဘွတ်တွင် ဖော်ပြချ က်သဘောထားနှင့်တကွ အနုပညာလောကမှ သဘောထားများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို စာတင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်…
”အခု ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုကို ထုတ်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနကို စာတင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေ ပါ တယ်။ ကျွန်တော် အရင်အင်တာဗျူး မှာ ဖြေခဲ့တာကို အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲ မှားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖြေတာ ဒီ ထဲက စာရင်းပါတဲ့ လူတွေကို ခေါ်ေ တွ့ တာမဟုတ်ပါဘူး။ ခေါ်တွေ့စရာ အ ကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက ဒီ Facebook ထဲက ပါ တဲ့အကြောင်းအရာသည် မှန်ခြင်း မမှန် ခြင်းကို
စုံစမ်းသွားမှာပါ။ ဒါကို ပြောတာ ပါ”
အထူးလျှို့ဝှက်ဆိုတဲ့ ဖိုင်တွေတောင် ပေါက်ကြားကုန်မှတော့ …
”အခုFacebook စာမျက်နှာ တွေပေါ်မှာ မူးယစ်စစ်ကြောရေးစခန်း က စစ်ချက်နဲ့ ထွက်ချက်တွေ ပေါ်ထွက် လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘရက်ဒ်လေ မန်းနင်း တောင်အဲ ဒီလောက် မစွမ်းသ လို ဝီကီလိခ်လည်း အဲသလို မတတ်နိုင် ခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်ကတော့ အထူးလျှို့ ဝှက်ဖို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ စစ်ကြော ထွက်ဆိုချက်တွေ ပေါက်ကြား တာပါ။ ကာယကံရှင်တွေ နစ်နာတာထက် မြန် မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စီမံမှုညံ့ ဖျင်းတာက ပိုဆိုးတာပါ။ အခုလဝက ဝန်ကြီးဟာ အဲဒီတုန်းက ရဲချုပ်ပါ။ တာဝန်အရှိဆုံး ပါ။
ဖြေရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ အထူး လျှို့ဝှက်ဆိုတဲ့ ဖိုင်တွေတောင် ပေါက် ကြားကုန်မှတော့ လဝကက ကောက်ယူ မယ့်သန်းခေါင်စာရင်းထဲက အချက် ပေါင်း ၄၂ ချက် မပေါက်ကြား စေရပါ ဘူးလို့ အာမခံထားတာ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ မယုံကြည်နိုင်တော့ပါဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် ပြည်သူ့ရဲ မှာ တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ ဖိုင်လေး တစ်ဖိုင် နှစ်ဖိုင်တောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘဲနဲ့ အ မျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဖို့ လွှတ် တော်မှာ တင်နေတာမျိုးကတော့ ဖင် မနိုင်ဘဲ မန်ကျည်းဖျော်ရည် သောက် ချင်နေသ လိုပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော၊ မင်းကိုနိုင်ရော၊ အစစ်ခံ ကြတာပဲ။ နောက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ကြမှာလဲ ပြောစရာဖြစ် လာတယ်။ လုပ်တဲ့လူကိုေ တာ့ မသိဘူး။ ဒါက ရဲဌာနက မပေါက်ကြားရင် ဘယ် ကပေါက်ကြားမှာလဲ။ ရဲမှာပဲ ရှိတာလေ။ စိုးမြတ်သူဇာဘက်က ကြည့်ရင်လည်း စိတ်ထိခိုက်တယ်။ သနားလည်း သ နား သွားတယ်။ သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ နဝရတ်တို့ အခြား လူတွေနဲ့လည်း သူတို့ခင်မင်မှုတွေအထိ အခိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကို မစဉ်းစား ကြဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆို တာရှိတယ် လေ”
လူမှုရေးအရပဲ ကြည့်ကြည့် ဥပဒေအရပဲကြည့်ကြည့် ဒါမျိုးက ဒီလို ဖေ့စ်ဘွတ်မတင်ဘဲ ဥပဒေအရပဲ ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စ …
ဦးအောင်စိုးဦး (တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ)
”အဲ့ဒီဖော်ပြချက်က အစိုးရဌာန တစ်ခုရဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ အရေးကြီးသော အစိုးရဌာနရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ် တယ်။ လျှိုဝှက်ချက်တွေပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ အပြင်ကို ပေါက်ကြား တယ်ဆိုရင် ဒါက တာဝန်ရှိတယ်။ နောက်ဒါက လွယ်လွယ် ကူကူယူလို့လည်းမရဘူး။ နောက်တစ်ခု က ဒါဟာ တရားဝင်သလားလို့ မေးရမယ်။ ရဲထွက်ချက်က တရားမဝင် ဘူး။ မှန်ခြင်း မမှန်ခြင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ မှန်ခြင်း မမှန်ခြင်း မဟုတ်ဘူး။ ရဲရှေ့မှာ ထွက်တဲ့စစ်ချက်က အသုံးမဝင်ဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ။ အဲ့ဒီအတွက် သက်ဆိုင် ရာက အရေးယူသင့်တဲ့ လူတွေလည်း ယူပြီးပြီလို့ ယူဆရတယ်။ ဒါခု ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ခုမှ ဖော်ပြခြင်း က နံပါတ် ၁ သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတယ်။ နံပါတ် ၂ က ကာယကံရှင်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်း တယ်။ နောက် ဖေ့စ်ဘွတ် မှာတင်တဲ့သူက တကယ်တမ်း ပြောရမယ်ဆို မတင်သင့် ဘူးပေါ့။ လူမှုရေးအရပဲ ကြည့်ကြည့် ဥပဒေအရပဲကြည့်ကြည့် ဒါမျိုးက ဒီလို ဖေ့စ်ဘွတ်မတင်ဘဲ ဥပဒေအရ ပဲဖြေရှင်း ရမယ့်ကိစ္စ၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက အဲ့ဒီလိုတင် တဲ့သူမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ တင်တဲ့ သူက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ သူတွေက အဲ့ဒါကို Share မလုပ်ဖို့လို တယ်။ Share လုပ်တဲ့သူတွေကလည်း အားပေးတဲ့အထဲမှာ ပါသွားပြီ။ အတွင်း စည်းပေါက်လို့ဖြစ်တာ။ အတွင်းစည်း မပေါက်အောင် ထိန်းရမှာ အဲဒီဌာနရဲ့ တာဝန်ပဲ။”
”တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကြုံတွေ့နေကျ လှည့်ကွက် ဆန်းတစ်ခုပါပဲ။ ပြည်သူ့ဘက်တော် သားတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သားတွေရဲ့ ကြား ဖြစ်လက်စ အမုန်း အတေးတစ်ခုကို အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များ ရဲ့ ပရိသတ်တွေပါ ရောထွေးပြီး ပဋိပက္ခ ကို ကြီးသထက်ကြီးအောင် ဇာတ်ရှိန် တင်လိုက်တာပါ။ ဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ တစ် မဟုတ်ချင်း ပျံ့နှံ့ပေါက်ကွဲသွားလောက် အောင် ကတော့ ဗေထိဆိုတာနဲ့ ဝိုင်းအုံ တတ်ကြတဲ့ လူသားတို့အကြိုက်အပုပ်နံ့ မိုက်မိုက်လေးပါ အပေါ်ကရိုက်ပေးလိုက် မှတော့ ပြီးပြီပေါ့။ ပထမဦးဆုံး အနု ပညာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ၊ ပြီးတာနဲ့ ပရိသတ် ပြည်သူ နှစ်ခြမ်းကွဲ၊ ဒီကြားထဲမှာ မူးယစ်မှုလေး ပါ စနက်တံနှ စ်ချောင်းလောက် လက် တွေ့ရှို့လိုက်လို့ကတော့ မီဒီယာတွေ မှာလည်း သတင်းတွေပါ။ နောက်ဆုံး လည်းကျရော ဗိုလ်ချုပ်နှင့် သား အပေါင်းပါများနဲ့ပါ ၅ သင်းပတ်လည် တိုက်ပွဲတွေလည်း နွှဲကြရော လိုရင်းကို လည်းရောက်ရောပေါ့။ အောင်မြင်ချက် ကတော့ လန်ထွက်တယ်ဗျာ။ တစ်ချက် လေးခုတ်ရုံနဲ့တင် နုတ်နုတ်စဉ်းပြီးသား ဖြစ်တာ မတန်ဘူးလားဗျာ။ အဲ ဒါပေမဲ့ လို့ ခုချိန်ထိတိုင်မှာပဲ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်း ထွက် မကိုက်လောက်စရာက သူတို့ ကြို မတွက်မိတဲ့ တစ်ချက် အဲဒါက လူမြင်လို့ တောင် မတော်တာဗျာ။ လူမမာကို ကြိုး တုပ်ပြီး ရိုက်တာကိုး။ ဒီပွဲမှာ ကိုင်လှုပ် မယ့်သူက အနုပညာရှင်တွေလေ။ သူတို့ ခမျာ အော်နိုင်စရာကို အကြောင်းမှ မရှိတော့တဲ့ဟာ၊ ဥပမာပြောရင် ကျွန် တော်တို့ ကျားထိုးတဲ့အခါ တစ်ကောင် တည်း အကျန်သမားကို အကွက်ရွှေ့ စရာမရှိအောင် ပိတ်ထားမိတဲ့အဖြစ်ပေါ့။ အခုပွဲလည်း ခင်ဗျားဘယ်အနိုင်ရတော့ မလဲ၊ ဒါပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အနုပညာရှင်တွေဘက်မှာ ကိုယ့်သတ် မှတ်ချက်နဲ့ ကိုယ် ဒဏ်ရာလေးတွေ ကိုယ်စီတော့ ရခဲ့ကြရပြီပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ အတွက် နောင်ကြီး ကျေနပ်လိုက်ပါ တော့။ နောင်ကြီး မည်သူမည်ဝါဆိုသည် ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ မည်သည့် ရည် ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသည်ကိုလည်း ကျွန် တော်အမှန်မသိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာ အမှန်အတိုင်း သိစေလို သည့် စေတနာဆိုလျှင်လည်း မည်သူ့ အတွက် မည်သို့ အကျိုးရှိမည်၊ မည်မျှ အကျိုးရှိသည်၊ အလဲအထပ်လုပ်ရမည့် အရင်းအနှီး များနှင့် တန်၏မတန်၏၊ ထို အရင်းအနှီးတွေကရော အဲဒီအတိုင်း အတာလောက် နစ်နာရလောက်စရာ တစ်ဖက်သားအပေါ် ယုတ်မာ စော်ကား ပြစ်မှုမြောက်သူများလား၊ တရားဥပဒေ အရတောင် အမှုမမြောက်တော့တဲ့ ဒီ ကိစ္စ အတွက် သင်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ရန်လိုချက်က မဆိုးလွန်းပေဘူးလား သူ ငယ်ချင်း၊ စိတ်လျှော့ပါဘော်ဒါ၊ အဆင့် မြင့်မြင့်တွေးပြီး အမြင်ကျယ်ကျယ်ကြည့် ပါ၊ တို့တွေ လုပ်ရမှာ ဒီအလုပ်မှ မဟုတ် တာ၊ အသုံးချခံ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ကိုရင်။ အသေအချာ ထပ်စဉ်းစား၊ ကျုပ်တို့ပြည် သူတွေအကုန်လုံးလိုအပ်ချက် အလုံးစုံနဲ့ ရုန်းကန်နေရတုန်း မဟုတ်ပါလား။ နေ့ စဉ်နဲ့အမျှ စားဝတ်နေရေးအတွက် တောင် အခြိမ်းခြောက်ခံနေကြရသူတွေ ပဲလေ။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမို့ လွတ်လိမ့်မယ် ထင်လား၊ အပူကိုယ်စီပါပဲ ညီရယ်၊ အကြီးအသေးသာကွာပါလိမ့်မယ်၊ အေး အဲဒီမှာမှ အခု တို့အတွက်…ပိုပြီး နစ်နာ စရာ တစ်ချက်တိုး တာလေးက ညီတော် မကျေလည်တဲ့ အဲဒီအချိန် အဲဒီ အခါကတည်းကကိုပဲ တို့တွေ အားလုံးဟာ အာဏာပါးကွက်သား တွေရဲ့ ထောင်ချောက်တွင်းသို့ တစ် ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဆွဲချခံခဲ့ရရင်း သူတို့ ကြိုက်သလို ပြုသမျှ နုရတော့မယ့် ပြန်ပေးအဆွဲ ခံထားရတဲ့ နယ်ရုပ် ကလေးတွေ ဖြစ်နေခဲ့ကြရတယ် ဆိုတာ ပါပဲ နောင်ကြီးရေ။
ဤမျှဆိုရင်တော့ စာရွက်ထဲပါသမျှ စာသားများကို သင် သဘောပေါက်ပေးပါတော့၊ ထိုမျှနှင့်ပင် မကျေ လည်သေးပါလျှင်လည်း အားလုံး ကိုယ်စား ကျွန်တော်ဖြေပေးပါဦး မည်၊ ဖြေပေးနိုင်ပါသည်၊ အကြောင်းကတော့ ဘာ နိုင်ငံတော်အလုပ်မှ မလုပ်တဲ့ ကျွန် တော်တစ်ယောက်တည်းသာ သေသေ ချာချာ အဖမ်းခံလိုက်ရလို့သာပါ။ အတွင်း ထဲအရောက် အကုန်ပေါက်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျေနပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တ ကယ်တော့ အရှုပ်ထုပ်တွေအတွက် အလုပ်မရှုပ်ကြပါနဲ့၊ တကယ်လုပ်ရမှာ တွေက အုတ်တစ်ချပ်သဲ တစ်ပွင့်တောင် မလုံလောက်ရတဲ့အထဲ ကဲ
(ဒါရိုက်တာမိုက်တီး၏ Facebook မှ)
ကျွန်တော်တို့ထက် တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာတွေ ပါနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက် သူတို့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့က ဖြေရှင်းသွားမှာပါ . . .
”ကျွန်တော်တို့ထက် စီနီယာကျတဲ့ လူလည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထက် တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာတွေပါနေ တယ်ဆိုတဲ့အတွက် သူတို့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ က ဖြေရှင်းသွားမှာပါ။ သူတို့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင် သွားမယ်။ ဘာမှမတိုင်ပင်ရသေးတဲ့အ တွက် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း သဘောထား မပြောသေး ပါဘူး။”
ဒါက လူမှုရေးဖောက်ပြန်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက်အေးဆေးပဲ။ ဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စမို့ ဘာမှလုပ်လို့ မရပါဘူး . . .
”ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူ ကြီးတွေစီမံတဲ့အတိုင်းပဲ လိုက်လုပ်မှာ ပါ။ ကျွန်တော့်အထက်မှာ စီနီယာတွေ အများကြီးပဲ။ လူပဲ မှားမှာပဲလေ ဟုတ် တယ်မလား။ မှားခဲ့ တဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိမှာပေါ့။ အဲဒါကို ပြန်လှန်ပြီး ဘာလုပ် မှာလဲ။ အဓိကက ကိုယ်ပဲ။ အခု ကျွန် တော်အေးဆေးပဲ လိမ်လိမ်မာမာပဲနေ တယ်။ အဓိကက ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြဿနာမဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်တော်တော့ ဦးမ ဆောင်ဘူး။ ခေါင်းထဲလည်း ထည့်မထား ဘူး။ ဒီကိစ္စက ဒါကလူမှုရေး ဖောက်ပြန် တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက် အေးဆေးပဲ။ ဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စမို့ ဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။ လူကြီးတွေ စီမံတဲ့အ တိုင်းပဲ လိုက်လုပ်မယ်။”
ကိုယ်ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်က အသိဆုံးပဲလေ။ အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော
အစ်မ ဘာမှမထိခိုက်ဘူး . . .
”ဒီပြဿနာကိစ္စက အဓိက ကိုယ် က အဓိကပဲ။ ကိုယ်ဟုတ်တယ် မဟုတ် ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်က အသိဆုံး ပဲလေ။ အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော အစ်မ ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်မဟုတ်ရင် ပြီးတာပဲ လေ။ အစ်မဘာမှလည်း ပြောစရာမရှိ ဘူး။ ဒီလိုမျိုးတွေ တက်လာတာလည်း အစ်မ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမဝေ ဖန် ဘူး။ ဘယ်လိုမှမနေဘူး။ အဓိကကတော့ အစ်မကိုယ်တိုင်က အဓိကပဲလေ ဟုတ် တယ်မလား။”
Nobody Perfect ဆိုပေမယ့် Perfect ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ကျွန်မဟာ Perfect မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ . . .
”ပရိသတ်များရှင် ဒီရက်ပိုင်းအ တွင်း ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်သို့ ရောက်လာသည့် ကျွန်မနှင့် ပတ်သက် သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ် သက်ပြီး ကျွန်မ မိသားစု မိတ်ဆွေသူ ငယ်ချင်းများအပါအဝင် ကျွန်မကို သံ ယောဇဉ်ရှိကြတဲ့ ပရိသတ်များ အားလုံး စိတ်အနှောင့်အယှက်များစွာ ဖြစ်ရ သလို ကာယကံရှင် ကျွန်မကိုယ်တိုင် လည်း အတိုင်းအဆမရှိ စိတ်ထဲမှာ ထိခိုက်နာကျင်ရပါတယ်။
Moe Zay Nyein ကိုကျွန်မ မသိပါ။ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလုပ် ရပ်ကို လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မ နားမလည်ပါ။ သူတင်ပြထားတဲ့ အ ကြောင်းအရာများကို မှန်ကန်ပါတယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှမထောက်ခံထား သလိုလုံးဝအမှန်လို့လည်းမယူဆသင့်ပါ။
အခြေအနေမှန်ကို သေချာမသိ ဘဲ ဝင်ရေးထားတဲ့ Comment နှစ်ခု လောက်ကို မြင်ရတဲ့အခါ ကျွန်မ တော် တော်ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေဟာ စည်းကမ်း မရှိ၊ အရှက်အကြောက် မရှိ၊ ဥပဒေ ဘောင်အတွင်း တကယ်နိုင်ငံတော်အစိုး ရက ဒီတိုင်းကြည့်မနေဘဲ ထိထိ ရောက် ရောက် အပြစ်ပေး ခဲ့တာ လူတိုင်းလည်း သိကြပါတယ်။
Nobody Perfect ဆိုပေမယ့်Perfect ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ကျွန်မ ဟာ Perfect မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်မမှာ အား နည်းချက်၊ ချို့ယွင်းချက် တွေ အများကြီးရှိသလို အမှားမရှိ အပြစ်ကင်းတဲ့ လူမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ ဘူး။ ကျွန်မ အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ လက်ရှိ မိဘတွေနဲ့အတူတူနေပြီး ကျွန်မ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း မှာ ရိုးသားစွာ နေထိုင်ပြီး တင့်တယ် အောင် ရပ်တည်နေပါတယ်။ အခု ကိစ္စ မှာ ကျွန်မကို မရည်ရွယ်လည်း ကျွန်မ ဓာတ်ပုံနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်အကြောင်းအရာ တွေကိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ အင်မတန် ခံရခက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး နားလည်သည့် အသိ ဥာဏ်မျိုးမရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားပေမယ့် ဒီနိုင်ငံသူတစ် ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိုတော့ ကျွန် မစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျွန်မနဲ့ သက်ဆိုင်သော ကိစ္စ များကိုပဲ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်မအလုပ်ကို လေးလေးစားစား လုပ် ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အနိုင်မယူ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ အရှုံးမပေးWin Win Situation ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါတယ်။ ကျွန်မ Life ကို Day by day ဖြတ် သန်း ပါတယ်။ ကျွန်မ ပျော်ပျော်နေတတ် ပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ပေါ့ပေါ့မနေခဲ့ ပါဘူး။
ကျွန်မ Life Perfect မဖြစ်ပေ မယ့် ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ကျွန်မကြောင့် ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက် နစ်နာအောင်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင် ဆိုး ရွားတဲ့ အပြစ်မျိုး၊ အမှားမျိုး မလုပ်ခဲ့ တဲ့အတွက် ဒီအသက်အရွယ်ထိ ဒီနေ ရာမှာ ကျွန်မရပ်တည်ခွင့်ရနေတာ လူ တိုင်းအမြင်ပါပဲ။ လိပ်ပြာသန့်တဲ့အတွက် ကျွန်မဘဝက မင်္ဂလာရှိပါတယ်။
MZN ရဲ့ အမှန်တရားဖော်ထုတ် တဲ့ ကိစ္စက ကျွန်မတင်မက အကြောင်း အရာထဲမှာ နာမည်ပါတဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင် ဖက် ကျွန်မရဲ့ အနုပညာရှင် မောင်နှမ တွေကိုပါ အများကြီးထိခိုက်နစ်နာစေပါ တယ်။ မိသားစုတွေ ရှိကြတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အ လှန်လေးစားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပျက်စီး စေပါတယ်။ သံသယေ တွနဲ့ ရင်းနှီးမှုကို ဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။
ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိ အ များအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဘယ်လောက် ပဲ (အမှန်) ဖြစ်နေပါစေ နောက်ဆုံးမှာ (အမှား) ဖြစ်စေပါ တယ်။
ပရိသတ်များရှင် MZN တင်ပြ ချက်မှာပါတဲ့ ကျွန်မနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံအပါအဝင် အကြောင်းအရာ အားလုံးကို ကျွန်မလုံးဝ လက်မခံပါ ဘူး။ အစစ်အမှန် ဆိုတာကိုလည်း မယုံ တဲ့အတွက် အသိအမှတ်လည်း မပြုပါ ဘူး။ ကျွန်မအတွက် အချိန်က ဘဝပါ။ ဘဝကို တန်ဖိုးထားသလို အချိန်ကို လည်း ကျွန်မ အရမ်းတန်ဖိုး ထားပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ ကို အကုန်ခံပြီး ဒီလိုပြန်ရှင်းပြရတာ ကျွန်မကိုချစ်တဲ့လေးစားကြတဲ့ ပရိသတ် တွေကို ကျွန်မတန်ဖိုးထား ထားလို့ပါ။ ကျွန်မအတွက် နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး အရေးပါတဲ့ လူတွေထဲမှာ ပရိသတ်များ ပါပါတယ်။ ဆက်လျှောက်ဖို့ ကျန်နေ သေးတဲ့ခရီးမှာ ကျွန်မကို လက်တွဲထား မယ့် အဖော်ကောင်းမပါပေမယ့် မိတ် ဆွေကောင်းတွေကိုလက်တွဲပြီး ပရိသတ် ပေးတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ ကျွန်မ ဆက် လျှောက် ချင်ပါတယ်။
MZN က ကွန်းမန့်တစ်ခုမှာ မကြီးစိုး စဆရလို့ သုံးနှုန်းထားပါတယ်။ စစ်သား သားသမီးဖြစ်လို့ ဒီအသုံးအနှုန်း ကို ကျွန်မနားလည်ပါတယ်။ ဦးMZN ရှင် (ဦးနဲ့ ပတ်သက် လို့ အနည်းငယ် သိထားတဲ့အတွက် ဦးတပ်ပြီး ခေါ်လိုက် တာပါ) ဦးပြောသလို အကြောင်းအရာ တွေ ချန်ထားခဲ့လို့ဆိုပြီး မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအတွက် ကျွန်မ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ကျေးဇူးတင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ ဒါပေမဲ့ ဦးပြောတဲ့ အသုံးနှုန်းအတိုင်းပြောရရင် ကျွန်မအ တွက် MZN စဆရမှာ မိတ်ဆွေကောင်း တွေ အများကြီး ထပ်ရလိုက်လို့ ဒီ့အတွက် ဦးကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဘယ်သူနဲ့မှ ရေရှည်အခြေအတင် မဖြစ်ချင်တာ ကျွန်မဆန္ဒပါ။ လူမှုဆက် ဆံရေးဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍပါ။ လူမှုဆက်ဆံ ရေး မပြေလည်ရင် တခြားဘယ်အရာ မှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှာ နေရတဲ့အချိန် မှာ သိခဲ့တဲ့ ဥပဒေတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ နေနေ၊ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဥပ ဒေမှာ တူညီတဲ့ ဥပဒေတစ်ခုတော့ရှိပါ တယ်။ အနုပညာ ရှင်များ(သို့) အောင် မြင်ထင်ရှား လူသိများသူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာတွေကို (၁) ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက (၂) တရားဥပဒေ အရ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင် (သို့) တရား ရုံးမှ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက (၃) လက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန် နေသူဟု ခိုင်လုံသောသတင်းအထောက် အထားမရှိပါက ဘယ်တော့မှ လူအများ မြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြန့်ဝေနိုင်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။
ကျွန်မကတော့ ဒီအကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အနေခက် တာမျိုး မဖြစ်စေချင်သလို ဥပဒေနဲ့ စကားပြောရတာမျိုးတွေအထိလည်း အလုပ်တွေ မရှုပ်ချင် ပါ။ အဲဒါကြောင့် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးနဲ့ နောက် ဆုံး ရှင်းပြတာပါ။ နောက်ထပ်ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာအကြောင်းအရာကိုမှ ကျွန်မ ပြန်ရှင်းပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့ အခွင့်အရေးကို တကယ်နားလည် လေး စားမယ်ဆိုရင် စာနာစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံ ရေးကို အသုံးပြုကြတာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ဘူးလား။
ကျွန်မကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်များ၊ ဒီ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည် ပါတဲ့ အနုပညာ မောင်နှမများရှင် ။ကျွန်မနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ဒီနေရာ ကနေ ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန် မကို နားလည်ပေးကြပါ။ ဒီကိစ္စမှာကျွန်မကို ကူညီဖေးမခဲ့တဲ့ သူများနဲ့ အ ကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သူတွေအားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘုရားဆင်းတုတော်၏ ဦးခေါင်းတော်မှ ဆံတော်များ ထွက်ပေါ်လာသည်ကို အနီးကပ်ဖူးတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-ငယ်ထွေး
Wednesday, 04 December 2013 02:49
ဗုဒ္ဓဘုရား ဆင်းတုတော်၏ ဦးခေါင်းတော် မှဆံတော်များ ထွက်ပေါ်လာသ ဖြင့် ပြည်သူအများပူဇော်နိုင်ရန် ပညာသိပ္ပံဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ အပူဇော်ခံထားကြောင်း သိရ သည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၈)ရပ် ကွက် ရေကူး ဘူတာရုံလမ်း ပညာ သိပ္ပံ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းတွင် ဦးခေါင်းတော်မှ ဆံတော်များ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို အများပြည် သူပူဇော်ဖူးမြော်နိုင်ရန် ဘုရား ဒကာမှပြောင်းရွှေ့ပူဇော်ထား ကြောင်း ဘုရား ဒကာဖြစ်သူဦး ခင်မောင်ဦးက ရန်ကုန်တိုင်းမ် နေ့စဉ်သတင်းစာသို့ ပြောသည်။
ဘုရားဒကာဖြစ်သူ ဦးခင် မောင်ဦးက ''ဇူလိုင် ၁ ရက်က စပြီးတော့ ဘုရားရုပ်ပွားတော် ကနေဆံတော်တွေပွင့်လာတာ ကိုဖူးမြော်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် မှာတော့ ရုပ်ပွားတော်လုံခြုံရေး နဲ့ အများပြည်သူဖူးမြော်နိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုပြီး ဦးတို့ ကိုးကွယ် တဲ့ဆရာတော်ကျောင်းကို နိုဝင် ဘာ ၃ဝရက်မှာ ရွှေ့ပြောင်းပူ ဇော်ခဲ့တာပါ''ဟုပြောသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ် မတ် ၁၆ရက် တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ် ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနရုံး ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးဝင်းဗိုလ် က ရာထူးတိုး နှင့် ပြောင်းတဲ့အချိန်တွင် အဆို ပါဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပူဇော်ရန် ပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုရား ဆံတော်မပွင့်မီအချိန်တွင် နေ အိမ်၌ ဝင်ငွေများတိုးပွားခဲ့ပြီးထူး ခြားဖြစ်စဉ်များဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဦးခင်မောင်ဦးက ပြော သည်။
''ဘုရားဆံတော်မပွင့်ခင် အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိပ်ရာ က စောင်ခေါက်တွေထဲမှာ လောက်ကောင်တွေတွေ့ခဲ့ရပါ တယ်။ ဘာအပုပ်အသိုးမှမရှိဘဲ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဘုရားဆံတော် ပွင့်တဲ့နေ့မှာပဲ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ ဘုရားမှာပူဇော်ထားတဲ့ သပြေခက် ကနေ အရွက်တွေထွက်လာပါ တယ်။ နေ့ချင်းကိုထွက်လာခဲ့ တာပါ။ ဘုရားဆံတော်ပွင့်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ငွေအလုံး အရင်းနဲ့တစ်ခါရခဲ့ပါတယ်'' ဟု ဦးခင်မောင်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဘုရားဆံတော် ပွင့်ခြင်းသည်ဖြစ်ခဲသည့် ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်ယခုထက်ပိုပြီး ထွန်းကားပြန့်ပွားလာနိုင်သည့် နိမိတ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပညာ သိပ္ပံဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာ ရေးကျောင်းဆရာတော် သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိ ကမိန့် တော်မူ သည်။
ပညာသိပ္ပံဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းဆရာ တော် သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘဒ္ဒ န္တပညာသာမိက ''နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ကျောင်းကိုရုပ်ပွားတော် ရောက်တဲ့ ည ၇ နာရီခွဲအချိန် မှာပဲ ကျောင်းဝင်းပြည့်ဖူးမြော် ပူဇော်သူတွေနဲ့ ပြည့်နေ ခဲ့ပါတယ်'' ဟုမိန့်တော်မူသည်။ တိုင်းသူပြည်သားခုနစ် ရက်သားသမီးများအနေဖြင့် ကံပွင့်၊ ဉာဏ်ပွင့်၊ ဓာတ်ပွင့်၊ လာဘ်ပွင့်ပြီးတော့ စီးပွားရေး များ တိုးတက်ပြီး သာသနာပြု ခွင့်များရသည့်အပြင် လက်ရှိ ကျင်းပတော့မည့် (၂၇) ကြိမ် မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးအကြီးဆုံး သော အောင်မြင်မှုများရနိုင် အောင်ကျင်းပနိုင်မည့်ပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်နိမိတ် များဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်သဒ္ဓ မ္မဇောတိကဓဇဘဒ္ဒန္တပညာသာ မိက မိန့်တော် မူ သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆံ တော်ပွင့်သည့်ဗုဒ္ဓဘုရားဆင်း တုတော်အား ယာယီစံကျောင်းဖြင့် အပူဇော်ခံထားရှိပြီး နောက်ပိုင်း အချိန်များတွင် စံကျောင်းတော် များ၊ ဘုရားကျောင်းဆောင် များတွင် ပူဇော်ပြီး အများပြည် သူဖူးမြော် နိုင်ရန် ခမ်းနား စွာ စီမံသွားရန်စီစဉ်နေကြောင်း သိ ရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို သမ္မတက မငြင်းပယ်ကြောင်း ပြောကြား
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မကငြင်းပယ်မှုမရှိကြောင်း သမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်အပေါ်မှာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကို စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ယူဆကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။
“ကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပြီးရင် သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ လေးယောက်တင်မဟုတ်ဘူး၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ မရှိသေးတဲ့ နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အခုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ သဘောထားကို နားထောင်ရမယ်၊ ဒါတွေအားလုံး နားထောင်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ လိုအပ်တယ်ထင်လို့ရှိရင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ကပြောတာပါ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ကျနော်တို့ ငြင်းပယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ၂၃ ရက်နေ့က မေတ္တာရပ်ခံစာပေးပို့ခဲ့တာပါ။
အဲဒီအပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လိုပဲ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၈ ခုရဲ့ သဘောထားအကြံပြုချက်တွေကို လိုအပ်တဲ့အပြင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ အခွင့်အာဏာကိုလည်း လေးစားဖို့လိုတဲ့အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာထွက်ပြီးချိန်မှ ညှိနှိုင်းမယ့်အစီအစဉ်တွေကို ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဘက်က တုန့်ပြန်ပြောကြားချက်ဟာ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကလည်း မနေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ဦးထောင်ဘို အ၀ိုင်းအနီး ဟွန်းသံကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်မှ စတင်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဟွန်းသံကင်းမဲ့ဇုန် စီမံချက်မှာ အောင်မြင်မှု မရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေ ၁ရက်မှ စတင်၍ ဟွန်းသံကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် Down Town ခြောက်မြို့နယ်ကို စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များအားလုံးကို တိုးချဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး (ရန်ကုန်)မှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဟွန်းသံကင်းမဲ့ဇုန်ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့ရခြင်း၏ အဓိက အချက်များမှာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား လုံလောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် နည်းပညာ အကူအညီများ လိုအပ်မှုကြောင့်ဟု အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်က ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြောကြားသည်။
''ဒီလုပ်ငန်းကတော့ အောင်မြင်မှုမရှိဘူးလို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစီမံချက်ကို အောင်မြင်အောင် ပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတော့ တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနဲ့ နည်းပညာ အထောက်အကူတွေ လိုအပ်မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ဒီဟွန်းသံ ကင်းမဲ့ဇုန်ကို အကောင်အထည် ဖော်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း ခရီးသွား ပြည်သူတွေ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ ထိတ်လန့်မှု မရှိအောင် သွားလာနိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်'' ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ''ဒီလို ဟွန်းသံကင်းမဲ့ ဇုန်အဖြစ် မသတ်မှတ်ခင်တုန်းက အရမ်းသံကျယ်တဲ့ ဟွန်းကိုတပ်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးက ဟွန်းတီးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ လမ်းဖြတ်သွားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး လဲကျသေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ သူမှာလည်း နှလုံးရောဂါအခံ ရှိပါတယ်'' ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်က ပြောကြားသည်။
ဟွန်းသံကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် မည်သည့်နေရာမှာ အကျုံးဝင်သည်ဟု အတိအကျ ထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်ပြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်ရှိ မြို့နယ်အားလုံးတွင် ဟွန်းမတီးရဟု ကန့်သတ်မှုကို ပြန်လည် စဉ်းစားရန် လိုအပ်နေသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြဧရိယာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
''ဟွန်းဆိုတာတီးဖို့ ကားထုတ်ကတည်းက တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ကားတိုင်းကဟွန်းတွေ အကုန်ဖြုတ်ပစ်ရမယ့် သဘောပေါ့။ ဟွန်းမတီးရဘူးဆိုရင် ယာဉ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် '' ဟု ယာဉ်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်နိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီးဂိမ်းပွဲတော်ကြီးတွင် ဘောလုံးပွဲစဉ် လက်မှတ်များကို အတုအပ မပြုလုပ်နိုင်ရေး စစ်ဆေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် (၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပွဲတော်ကြီးတွင် ဘောလုံးပွဲစဉ် လက်မှတ်များကို အတုအပ မပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ဝင်ပေါက် ဂိတ်နေရာများတွင် စက်များဖြင့် စနစ်တကျ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစက်များဖြင့် စနစ်တကျ စစ်ဆေးသွားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်မှတ်ရောင်းချ တာဝန်ခံ ဦးထွန်းလှအာင်က ''လက်မှတ်တွေကို သတ်မှတ်ဂိတ်ပေါက် နေရာတွေမှာ စစ်ဆေးသွားပါ့မယ်၊ ပွဲကြည့် အများပြည်သူများကလည်း လက်မှတ်တွေကို သတ်မှတ်နေရာတွေ မှာ ကြိုတင်ဝယ်ကြစေချင်ပါတယ်၊ လက်မှတ်တွေကို စက်တွေနဲ့ စနစ်တကျ စစ်ဆေးသွားမှာပါ၊ ဘောလုံးပွဲ လာကြည့်မှ အတုဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။ ''အရေးတော့ မယူပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပွဲကြည့်ပရိသတ်က ပွဲစဉ်ကို ကြည့်လို့ မရတော့ဘဲ လှည့်ပြန်သွားရမှာ စိုးလို့ပါ၊ သတ်မှတ်နေရာမှာ ကြိုတင်ဝယ်ထားရင် စိတ်ချရပါတယ်၊ အခုဆိုရင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဗီယက်နမ် ပရိသတ်က မနေ့ကပဲ လက်မှတ်အစောင် ၅ဝ လိုချင်လို့ဆိုပြီး ပြောလို့ အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်နိုင်ပါတယ်လို့တောင် ပြောလိုက်ပါသေးတယ်၊ လက်ရှိ ဗီယက်နမ်နဲ့ ဂျပန်က ပွဲကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေ ရှိနေပါပြီ'' ဟု ရှင်းပြသည်။ ကြိုတင်လက်မှတ်များနှင့် ပွဲရက်များတွင် ရောင်းချမည့် လက်မှတ်နှုန်းထား များအရ အမျိုးသား ဘောလုံးပွဲစဉ် လက်မှတ်ခ နှုန်းထားများမှာ အုပ်စုပွဲစဉ်များတွင် ရိုးရိုးတန်း ငွေကျပ် ၂ဝဝဝ၊ အထူးတန်း ငွေကျပ် ၄ဝဝဝ၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်နှင့် ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များတွင် ရိုးရိုးတန်း ငွေကျပ် ၃ဝဝဝ၊ အထူးတန်း ငွေကျပ် ၅ဝဝဝ နှင့် အမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲစဉ် လက်မှတ်ခ နှုန်းထားများမှာ ရိုးရိုးတန်း ငွေကျပ် ၁ဝဝဝ၊ အထူးတန်း ငွေကျပ် ၃ဝဝဝ သတ်မှတ်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။ ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပွဲစဉ်များအရ ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်မှတ်ရောင်းချမည့် နေရာများမှာ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း၊ ပဒုမ္မာကွင်း၊ စလင်းကွင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး နေပြည်တော်တွင် လက်မှတ်ရာင်းချမည့် နေရာများမှာ မြို့မဈေး၊ ပေါင်းလောင်းကွင်း၊ Junction (Nay Pyi Taw)၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိကွင်း ဂိတ်အမှတ်(၁) တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရကာ မန္တလေးမြို့တွင် လက်မှတ် ရောင်းချမည့် နေရာများမှာ ဗထူးကွင်း၊ လမ်း ၃ဝ နှင့် ၉ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည် မနော်ဟရီလမ်းနှင့် ငုရွှေဝါ လမ်းကြား ၂၃ လမ်း၊ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ၃ လမ်း၊ ငုရွှေဝါနှင့် သဇင်လမ်းအကြား၊ မဟာအောင်မြေလမ်း ၄ဝ နှင့် ၃၅ လမ်း အကြားတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။